စီးပွားရေးနှင့် စာရင်းအင်း ဒီပလိုမာကိုင်ဆောင် ထားသူများ ဆက်လက် တက်ရောက်နိုင်သော နိုင်ငံတကာ တက္ကသိုလ်များအကြောင်း ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲ
LCCI Level3, CAT, ABE, ACCA Part2ပြီးဆုံးထားသူများ စင်ကာပူ Kaplan Higher Education Academy တွင် နောက်ဆုံးနှစ် တစ်နှစ်သာ တက်ရောက် ရန်လို အပ်ပြီး၊ သြစတြေးလျ Murdoch University မှ BCom in Accountancy နှင့် အိုင်ယာလန် University College Dublin မှ BSc (Hons) Finance/ Management/ Logistics/ Marketing အထူးပြုဘွဲ့ တွေရရှိနိုင် မည်ဖြစ်သည်၊၊.....
ကျင်းပမည့်ရက် - 17.3.2012(Sat)
ကျင်းပမည့်အချိန် - 10:00 pm - 12:00 pm ကျင်းပမည့်နေရာ - ရန်ကုန်မြို့Summit Parkview Hotel
Shelton College ၏ ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲ စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ Shelton College ၏ ပညာရေး ဆွေးနွေးပွဲကို ၂၀၁၁ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁၃ရက် မွန်းလွဲ ၁နာရီ ၃နာရီအထိ ရန်ကုန်မြို့ရှိ Central Hotel Jade Hall) တွင်ပြုလုပ်....
ကျင်းပမည့်ရက် - 13.8.2011(Sat)
ကျင်းပမည့်အချိန် - 1:00 pm - 3:00 pm ကျင်းပမည့်နေရာ - Central Hotel (Jade Hall)
နိုင်ငံတကာပညာရေးနှင့်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများဆွေးနွေးပွဲ နိုင်ငံတကာပညာရေးလမ်းကြောင်းသို့ ဆက်လက်တက်လှမ်းလိုသူ ကျောင်းသားများအတွက် ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁၃ရက်၊ နေ့လည် ၂ နာရီ မှ ညနေ ၄နာရီထိ ရန်ကုန်မြို့ရှိ Traders Hotel တွင် ကျင်းပ....
ကျင်းပမည့်အချိန် - 2:00 pm - 4:00 pm ကျင်းပမည့်နေရာ - Traders Hotel
UCSI University INFO Day Synergy Education မှကြီးမှူးစီစဉ်သော UCSI University ၏ INFO Dayကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁၃ ရက်၊ နေ့လည် ၁ နာရီမှ ၃ နာရီအထိ ရန်ကုန်မြို့ရှိ Park royal Hotel တွင်ကျင်းပ....
ကျင်းပမည့်အချိန် - 1:00 pm - 3:00 pm ကျင်းပမည့်နေရာ - Park royal Hotel
သြစတြေးလျနိုင်ငံ အနောက်ပိုင်းရှိ အကြီးဆုံးတက္ကသိုလ်ဖြစ်သော Curtin University သို့သွားရောက် ပညာသင်ကြားလိုသော ကျောင်းသား ကျောင်းသူများအတွက် အခွင့်အလမ်း နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်များသို့ သွားရောက်သင်ကြားလိုသော ကျောင်းသားများအတွက် University Foundation Program များကို ဖွင့်လှစ် သင်ကြားပေးလျှက်ရှိ်....
ကျင်းပမည့်ရက် - 30.7.2011(Sat)
ကျင်းပမည့်အချိန် - 1:00 pm ကျင်းပမည့်နေရာ - Traders Hotel ကုန်းဘောင်တကောင်းခန်းမ
�SHELTON COLLEGE, Singapore အကြောင်းသိကောင်းစရာများ ဟောပြောဆွေးနွေးမည်� Edu-trust လက်မှတ်ရ Shelton College International မှ ပညာရေးဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်းများ အကြောင်းနှင့် ဝင်ခွင့်လိုအပ်ချက်များအကြောင်းကို သြဂုတ်လ ၁၃ ရက် (နေ့လည် ၁ နာရီမှ ၃ နာရီ အထိ) Central Hotel တွင် ပြုလုပ်ကျင်းပမည်ဖြစ်....
ကျင်းပမည့်အချိန် - 1:00 pm to 3:00 pm
ကျင်းပမည့်နေရာ - Central Hotel
MSI ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုမှ ပထမအကြိမ် နိုင်ငံတကာပညာရေးစုံညီပွဲ ကြီးမှုးကျင်းပမည် Myanmar Search International (MSI) Education Consultancy Services Co,ltd မှ ကြီးမှုး၍ နိုင်ငံတကာပညာရေးစုံညီပွဲကို Park Royal Hotel ရှိ Ball Room (1) နှင့် (2) တွင် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇူလိုင် (၁၅) ရက် သောကြာနေ့တွင် နေ့လည် (၁၀) နာရီမှ ညနေ (၅) နာရီအထိ ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း....
ကျင်းပမည့်ရက် - 15.7.2011(Fri)
ကျင်းပမည့်အချိန် - 10:00 am to 5:00 pm
ကျင်းပမည့်နေရာ - Park Royal Hotel ရှိ Ball Room (1)
INTI UC နှင့် OSM ပညာရေး အတိုင်ပင်ခံ စင်တာတို့ ပူးပေါင်းကျင်းပသော ပညာရေးဟောပြောပွဲ မလေးရှားအခြေစိုက် INTI University College မှ ယခုလာမည့် July လ (7) ရက်နေ့တွင် မြေနီကုန်းပလာဇာ ဒုတိယထပ်ရှိ OSM Education Centre နှင့်ပူးပေါင်း၍ ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲကို ကျင်းပမည်....
ကျင်းပမည့်ရက် - 7.7.2011(Thu)
ကျင်းပမည့်အချိန် - 3:00 pm to 5:00 pm
ကျင်းပမည့်နေရာ - OSM Centre ရှိ မြေနီကုန်းပလာဇာ ဒုတိယထပ်
MSI Office တွင် ပညာရေးဆွေးနွေးဟောပြောပွဲကျင်းပမည်
၁၉၆၅ ခုနှစ်တွင် The University of Newcastle သည် သြစတြေးလျနိုင်ငံတွင် ကိုယ်ပိုင်နာမည် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်မှုဖြင့် စတင်တည်ထောင်နိုင်ခဲ့သည့် တက္ကသိုလ်ဖြစ်ပြီး ၊ ဘာသာရပ်ပေါင်း (၃၀) ကျော် နှင့် ကျောင်းသားပေါင်း (၁၇၀၀) ကျော်ဖြင့် စတင်ခဲ့သည် ယခုအခါကျောင်းသားဦးရေ (၂၃၀၀၀) ကျော် ရှိပြီး (၃၅၀၀) ကျော်မှာ နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများဖြစ်ပြီး ....
ကျင်းပမည့်ရက် - 4.7.2011(Mon)
ကျင်းပမည့်နေရာ - MSI ရုံးခန်း
KMD (Overseas Studies Counseling Services) နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်များသုိ့ သွားရောက် ပညာသင်ကြားလိုသော ကျောင်းသား ကျောင်းသူများအတွက် KMD(OSCS) မှ တစ်ဦးချင်း အခမဲ့တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပေးမည်ဖြစ်ပြီး ....
ကျင်းပမည့်ရက် - 1 July 2011 (Friday)
ကျင်းပမည့်အချိန် - 10 am to 12 noon
ကျင်းပမည့်နေရာ - KMD(Overseas Studies Counseling Services)
လေယာဉ်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းခြင်း အင်ဂျင်နီယာ ပညာရပ်ကို မလေးရှားနိုင်ငံတွင် လေ့လာသင်ယူနိုင်ပြီ အခြေခံလိုအပ်ချက်များ
- အသက် ၁၈ နှစ်နှင့်အထက်ဖြစ်ရမည်။ ....
ကျင်းပမည့်ရက် - 24-25.6.2011(Fri-Sat)
ကျင်းပမည့်အချိန် - 9:00 am - 10:00 am
ကျင်းပမည့်နေရာ - Park Royal Hotel
STUDY ABROAD မှကြီးမှူးကျင်းပမည့် England နှင့် Ireland နိုင်ငံကျောင်းများ၏ ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲ အင်္ဂလန်နှင့်အိုင်ယာလန်နိုင်ငံတွင် သွားရောက်ပညာဆည်းပူးရန် စိတ်ဝင်စားသည့်ကျောင်းသား လူငယ်များအတွက် အင်္ဂလန်-အိုင်ယာလန်နိုင်ငံ ပညာရေး ဆွေးနွေးပွဲကို STUDY ABROAD မှကြီးမှူး စီစဉ်၍ ....
ကျင်းပမည့်ရက် - 23.6.2011(Thu)
ကျင်းပမည့်အချိန် - 4:00 pm - 6:00 pm
ကျင်းပမည့်နေရာ - PARK ROYAL HOTEL, MEETING ROOM (3)
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း "Essential Knowledge of Language Processing For IT professionals ဟောပြောပွဲ ကျင်းပမည် သတင်းအချက်အလက် နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာ ပညာရှင်အသင်း (MCPA) မှ ကြီးမှုး၍ ICT နည်းပညာပြန့်ပွားရန် ....
ကျင်းပမည့်ရက် - 18.6.2011(Sat)
ကျင်းပမည့်အချိန် - 1:00 pm - 3:00 pm
ကျင်းပမည့်နေရာ - အခန်း(၂၀၅)၊ မြန်မာအင်ဖိုတက်ခ်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မျြိ့။
Analytical Focus on Myanmar Economic Development ဟောပြောပွဲ Knowledge Bridge Magazine မှ စီစဉ်ပြုလုပ်သည့် ဟောပြောပွဲကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၉ ရက်တွင် ရန်ကုန်မြို့၊ Traders Hotel ရှိ ကုန်းဘောင်-တကောင်းခန်းမတွင် ကျင်းပပြုလုပ်....
ကျင်းပမည့်ရက် - 19.6.2011(Sun)
ကျင်းပမည့်နေရာ - Traders Hotel
စင်္ကာပူ Nanyang Institute of Management (NIM) Seminar ဇွန် ၂၅ ကျင်းပမည် စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ Nanyang Institute of Management (NIM) မှ ယခုလာမည့် June လ 25th ရက်နေ့ နေ့လည် (၂)နာရီမှ ညနေ (၅)နာရီအထိ OSM Education Centre နှင့် ပူးပေါင်း၍ ၄င်း OSM စင်တာတွင် ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်....
ကျင်းပမည့်ရက် - 25.6.2011(Sat)
ကျင်းပမည့်အချိန် - 2:00 pm - 5:00 pm
ကျင်းပမည့်နေရာ - OSM Education Centre
အင်္ဂလန် ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်များသို့ဝင်ခွင့်ပြင်ဆင်လျောက်ထားခြင်း နှင့် ပညာသင်ယူခြင်းဆိုင်ရာ သတင်း အချက်အလက်များအကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားမည်
သြစတြေလျနှင့် နယူးဇီလန်အခြေစိုက် Study Group နှင့် CROWN Education တို့ပူးပေါင်းစီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု့ဖြင့် အင်္ဂလန် ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း တက္ကသိုလ်များသို့ ၀င်ခွင့်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ လျောက်ထားခြင်း....
ကျင်းပမည့်ရက် - 22.6.2011(Wed)
ကျင်းပမည့်အချိန် - 10:00 am - 12:00 pm
ကျင်းပမည့်နေရာ - ParkRoyal
STI မှ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်သည့် ကျောင်းသားမိဘများအား Parent Conference ကျင်းပမည်
ကျောင်းသားများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာရပ်နှင့် မိမိတို့ ရွေးချယ်သင်ကြားမည့် ဘွဲ့ကြိုဘာသာရပ်များသည် အလွန်အရေးပါစွာ ဆက်စပ်လျှက်ရှိ....
ကျင်းပမည့်နေရာ - STI Education တည်ရှိရာ-အဆောင်(၄)၊ အခန်း(၇)၊ Myanmar Info-Tech, Hlaing Campus ၊ လှိုင်မြို့နယ်နှင့်
အမှတ် (၃၇၇) ၊ ရွှေဘုံသာလမ်း (အထက်)၊ ပန်းဘဲတန်း မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့
ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ပညာရှင်များ၏ ဟောပြောပွဲဖိတ်ကြားခြင်း
ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ် (UMFCCI) သည် ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ပညာရှင်များ ဟောပြောပွဲများကို စဉ်ဆက်မပြတ် ကျင်းပလျှက်ရှိ....
ကျင်းပမည့်ရက် - 28.5.2011(Sat)
ကျင်းပမည့်အချိန် - 2:00 pm
ကျင်းပမည့်နေရာ - UMFCCI အသင်းချုပ်ရုံး၊ မင်္ဂလာခန်းမ။
အမှတ် (၂၉)၊ မင်းရဲကျော်စွာလမ်း (စိန်ဂျွန်းမှတ်တိုင်)၊
လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ဖုန်း - ၂၁၄၃၄၄/၅/၆/၇/၈/၉
ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာပညာရှင်များဟောပြောပွဲ မြန်မာနိုင်ငံ ငါးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံပုစွန်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းတို့ ပူးပေါင်းကျင်းပသည့် ဟောေုပြာပွဲများကို ၂ဝဝ၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ၊ (၇) ရက်နေ့မှစ၍ (၂) ပတ်လျှင် တစ်ကြိမ်ကျင်းပ လျှက်ရှိ....
ကျင်းပမည့်နေရာ - မြန်မာနိုင်ငံငါးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်၊ ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီးနှင့် စက်မှုဆေးဝါးလမ်းထောင့်၊
အနောက်ကြို့ကုန်း၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။
နိုင်ငံတကာ စီပွားရေးနှင့် စီမံခန့် ခွဲ မှု့ ဘာသာရပ်များ နှင့် အဆိုပါဘာသာရပ်များသင်ယူရာတွင် သတိပြုရမည့်အချက်များကို ဆွေးနွေးပြောကြားမည်
နိုင်ငံတကာတွင် ပညာဆက်လက်သင်ယူမည့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအတွက် အထူးပြုဘာသာရပ်များကို ရွေးချယ်သင်ယူရာတွင် အဆင်ပြေ လွယ်ကူမှု့ရှိစေရန် နှင့် အထောက်အကူ ပြုစေရန်၊ Kaplan Higher Education Academy နှင့် CROWN Education တို့ပူးပေါင်းစီစဉ်မှု့ဖြင့်၊ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် စားရင်းအင်း၊ စီးပွားရေးဘာသာရပ်များအကြောင်း....
ကျင်းပမည့်ရက် - 11.6.2011(Sat)
ကျင်းပမည့်အချိန် - 10:00 am - 12:00 am
ကျင်းပမည့်နေရာ - Park Royal Hotel Read More��
YES2Malaysia မလေးရှားပညာရေးပြပွဲကြီး ပြုလုပ်မည်
YES2Malaysia ဟုနာမည်ပေးထားသော (၆) ကြိမ်မြောက်မလေးရှားပညာရေးပြပွဲကြီးကို ၂၀၁၁ ခုနှစ် မေလ ၂၈၊ ၂၉ ရက်နေ့များတွင် နှစ်ရက်တိုင်တိုင် မနက် ၁၁ နာရီမှ ညနေ ၄ နာရီအထိ Park Royal Hotel တွင်ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း....
ကျင်းပမည့်ရက် - 28/29.5.2011(Sat, Sun)
ကျင်းပမည့်အချိန် - 11:00 am - 4:00 pm
ကျင်းပမည့်နေရာ - Park Royal Hotel (Ball Room) Yangon Read More��
ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုဘာသာရပ်အကြောင်းဆွေးနွေးပွဲ CROWN Education နှင့် စင်ကာပူနိုင်ငံ Management Development Institute of Singapore (MDIS) တို့ ပူးပေါင်းစီစဉ်မှုဖြင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုဘွဲ့လွန်ဘာသာရပ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက် ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လတွင် ပထမဆုံးသင်ကြားပို့ချမည့် BSc (Hons) Bio Technology ဘာသာရပ်များ အကြောင်းနှင့် ဆက်စပ်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများအကြောင်း....
ကျင်းပမည့်ရက် - 20.5.2011(Fri)
ကျင်းပမည့်အချိန် - 3:00 pm - 5:00 pm
PSB မှ အင်္ဂလိပ်စာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ
PSB Academy မှ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွက် ဒုတိယအကြိမ်အဖြစ် GCE �O� Level/ IGCSE ကျောင်းသားများအတွက် အင်္ဂလိပ်စာအရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲကို ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးမြို့များတွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း....
ကျင်းပမည့်ရက် - 22.5.2011(Sun)
ကျင်းပမည့်နေရာ - Park Royal Hotel Ballroom Read More��
Ministry of Higher Education Malaysia မှ ဦးစီး၍ Education Malaysia Exhibition & Student Enrichment Workshop 2011 ကို ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း....
ကျင်းပမည့်ရက် - 28/29.5.2011(Sat,Sun)
Taylor�s University Open Day ပြုလုပ်မည် Brand Excellent Award 2008 နှင့် Tier5Excellent Award (SETARA 2009) ရရှိထားသော Taylor�s University ၏ Taylor�s University Open Day ကို Myanmar Search International မှ ဦးစီး၍ မေလ ၂၁ ရက်နေ့၊ မနက် ၁၁းဝဝ နာရီမှ ညနေ ၄းဝဝ နာရီထိ Park Royal Hotel Ballroom3တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း....
ကျင်းပမည့်ရက် - 21.5.2011(Sat)
ကျင်းပမည့်နေရာ - Park Royal Hotel Ballroom 3
စင်ကာပူပညာရေးအကြောင်းဟောပြောပွဲ စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် အင်ဂျင်နီယာ၊ ကွန်ပျူတာနှင့် စီးပွားရေးဘာသာရပ်များကို တက်ရောက်လိုသူများအတွက် ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ မေလ ၁၅ ရက်၊ နံနက် ၁၀ နာရီမှ နေ့လည် ၁၂ နာရီအထိ OESC Seminar Room တွင် ပြုလုပ်သွားမည်....
ကျင်းပမည့်ရက် - 15.5.2011(Sun)
ကျင်းပမည့်အချိန် - 10:00 pm - 12:00 noon ကျင်းပမည့်နေရာ - OESC Seminar Room
Education for All ဟောပြောပွဲ
နဝရတ်ပညာရေး၏ Education for All နိုင်ငံရပ်ခြားပညာသင်သိကောင်းစရာဟောပြောပွဲကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ မေလ ၁၄ ရက်၊ ညနေ ၃ နာရီမှ ၅ နာရီအထိ ရန်ကုန်မြို့၊ Traders Hotel (ကုန်းဘောင်-တကောင်း) ခန်းမ၌လည်းကောင်း....
ကျင်းပမည့်အချိန် - 2:00 noon - 4:00 pm ကျင်းပမည့်နေရာ - တောင်ကြီးမြို့၊ ရှမ်းစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုခန်းမ။
မေလ ၁၃ ရက်၊ နံနက် ၉ နာရီခွဲမှ ၁၁ နာရီခွဲအထိ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ယနေ့ကမ္ဘာအကြောင်းဟောပြောပွဲ
မေလ ၂၀ ရက်တွင်ကျရောက်သော World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development အထိမ်းအမှတ်ဟောပြောပွဲကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ မေလ ၂၀ ရက်၊ ညနေ ၅ နာရီတွင် ဗြိတိသျှကောင်စီ စာကြည့်တိုက်တွင်ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း....
ကျင်းပမည့်အချိန် - 5:00 pm ကျင်းပမည့်နေရာ - ဗြိတိသျှကောင်စီ စာကြည့်တိုက်။
ACCA နှင့် CAT ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲ ACCA နှင့် CAT (FIA) စာရင်းကိုင်ပညာရပ်များကို စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ Kaplan Learning Institute တွင် တက်ရောက်သင်ကြားနိုင်မည့် ပညာရေး ဆွေးနွေးပွဲကို ....
ကျင်းပမည့်ရက် - 13.5.2011(Fri)
ကျင်းပမည့်အချိန် - 9:30 am - 11:30 am
ကျင်းပမည့်နေရာ - MAS စာရင်းကိုင်သင်တန်းကျောင်း၊ ၄၅လမ်း၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်။
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း �Advances and Future Prospects in Visualizations and Simulations: A career-oriented perspective�
သတင်းအချက်အလက် နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင် အသင်း (MCPA) မှ ကြီးမှုး၍ Myanmar World Distribution မှပံပိုးကူညီ၍ ၂၀၁၁ ပြည့်နှစ်၊....
ကျင်းပမည့်ရက် - 6.5.2011(Thu)
ကျင်းပမည့်နေရာ - အခန်း (၂၀၅)၊ မြန်မာအင်ဖိုတက်ခ်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ်မှ "Global Economic Trends and Investment Implications for Myanmar" ဟောပြောပွဲကျင်းပမည် မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ် (MCF) မှကြီးမှူး၍ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ မေလ (၂) ရက် ( တနင်္လာနေ့) တွင် နေ့လည် (၂း၀၀) မှ (၄း၀၀) နာရီအထိ ရန်ကုန်မြို့၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ မြန်မာအင်ဖိုတက်ခ်၊ အခန်း (၂၀၅) တွင် Singapore နိုင်ငံမှ ဝါရင့်စီးပွားရေးပညာရှင် Dr. WONG, YIT FAN ၏ နိုင်ငံတကာလုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံများကို အခြေခံ၍ "Global Economic Trends and Investment Implications for Myanmar" ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဟောပြောဆွေးနွေး....
ကျင်းပမည့်ရက် - 2.5.2011(Mon)
ကျင်းပမည့်အချိန် - 2:00 pm - 4:00 pm
မြန်မာနိုင်ငံငါးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံပုစွန်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းတို့ ပူးပေါင်းကျင်းပသည့် ဟောပြောပွဲများကို ၂၀၀၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ၊ (၇) ရက်နေ့မှစ၍ (၂) ပတ်လျှင် တစ်ကြိမ်ကျင်းပလျှက်ရှိပါသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်လည်း (၂) ပတ်လျှင် တစ်ကြိမ် ဆက်လက်ကျင်းပ....
ကျင်းပမည့်ရက် - 30.4.2011(Sat)
ကျင်းပမည့်အချိန် - 2:00 pm ကျင်းပမည့်နေရာ - မြန်မာနိုင်ငံငါးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ် (သီရိအဏ္ဏဝါခန်းမ)၊
အနောက်ကြို့ကုန်း၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအထောက်အထောက်အကူပြု အထူးပြုဘာသာရပ်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် Double Major သင်ယူခြင်းအကြောင်း သိကောင်း စရာများကို James Cook University နှင့် CROWN Education တို့ မှ ရှင်းလင်းပြောကြားမည်
နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်များတွင် သင်ကြားမှု့သင်ယူမှု့များ ပြောင်းလဲလာသည့်အလျောက်၊ ကျောင်းပြီးအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရာတွင် အထောက်အကူ ပြုစေမည့် ဘာသာရပ်များကို ရွေးချယ်သင်ယူရန် လိုအပ်....
ကျင်းပမည့်ရက် - 7.5.2011(Sat)
ကျင်းပမည့်နေရာ - PARKROYAL Hotel Read More��
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း ICT-Laboratory �Cisco Router and Switch Password Recovery� ခေါင်းစဉ်ဖြင့် လက်တွေ့စမ်းသပ်ပြုလုပ်မည် မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း (MCPA) သည် အသင်းသားများ၏ ICT ပညာရပ်ဆိုင်ရာ လက်တွေ့ လေ့လာမှုများအား အထောက်အကူ ပြုနိုင်ရန်အတွက် လစဉ် LAB Schedule များရေးဆွဲ၍ လက်တွေ့ လုပ်ဆောင်မှုများကို ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိ....
ကျင်းပမည့်ရက် - 29.4.2011(Fri)
ကျင်းပမည့်အချိန် - 3:00 pm ကျင်းပမည့်နေရာ - MICT Park
မြန်မာ့နှစ်သစ်ကူးအကြို အထူးအစီအစဉ်တစ်ရပ်အဖြစ် Education For All မှ ကျင်းပသော �နိုင်ငံရပ်ခြား ပညာသင်အခွင့်အလမ်းသစ်များ� ဟောပြောပွဲကို ၂၀၁၁ ဧပြီလ (၇) ရက် ကြာသပတေးနေ့ မွန်းလွဲ (၁) နာရီတွင် ရန်ကုန်မြို့ Traders Hotel ၌ ကျင်းပ....
ကျင်းပမည့်ရက် - 7.4.2011(Thu)
ကျင်းပမည့်အချိန် - 1:00 pm ကျင်းပမည့်နေရာ - Traders Hotel
London School of Commerce မှပေးအပ်မည့် အထူးပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး လျှောက်ထားခြင်းအကြောင်း ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပမည် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကျောင်းသူကျောင်းသားများအတွက် London School of Commerce မှ ပေးအပ်မည့် အထူးပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးလျှောက်ထားခြင်းနှင့် ပါတ်သတ်သောဆွေးနွေးပွဲ တစ်ရပ်ကို London School of Commerce နှင့် Crown Education တို့မှ ဧပြီလ (၂) ရက်တွင် နံနက် (၁၀) နာရီမှ (၁၂) နာရီအထိ PARKROYAL HOTEL ၌ကျင်းပပြလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း....
ကျင်းပမည့်ရက် - 2.4.2011(Sat)
ကျင်းပမည့်အချိန် - 10:00 am - 12:00 pm ကျင်းပမည့်နေရာ - PARKROYAL HOTEL
Knowledge Bank ဖွင့်လှစ်ခြင်း တစ်နှစ်ပြည့် Seminar ပြုလုပ်မည် Knowledge Bank Library & Education Services ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ တစ်နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် Seminar တစ်ခုကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၃ ရက် မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် UMFCCI၊ အမှတ် (၂၉)၊ မင်းရဲကျော်စွာလမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း....
ကျင်းပမည့်ရက် - 3.4.2011(Sun)
ကျင်းပမည့်အချိန် - 1:00 pm ကျင်းပမည့်နေရာ - UMFCCI၊ အမှတ် (၂၉)၊ မင်းရဲကျော်စွာလမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်။
�နိုင်ငံရပ်ခြားပညာသင် အခွင့်အလမ်းသစ်များ ဟောပြောပွဲ�
မြန်မာ့နှစ်သစ်အကြို Education for All အထူးအစီအစဉ်တစ်ရပ်အဖြစ် �နိုင်ငံရပ်ခြားပညာသင်ယူရေး အခွင့်အလမ်းသစ်များ� ဟောပြောပွဲကို ၂၀၁၁ ဧပြီ (၇) ရက်နေ့ နေ့လည် (၁) နာရီတွင် ရန်ကုန်မြို့၊ Trader Hotel (ကုန်းဘောင်-တကောင်း)ခန်းမတွင် ကျင်းပ....
ကျင်းပမည့်အချိန် - 1:00 pm ကျင်းပမည့်နေရာ - Trader Hotel (ကုန်းဘောင်-တကောင်း)ခန်းမ၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာပညာရှင်များဟောပြောပွဲ မြန်မာနိုင်ငံငါးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံပုစွန်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းတို့ ပူးပေါင်းကျင်းပသည့် ဟောပြောပွဲများကို ၂၀၀၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ၊ (၇) ရက်နေ့မှစ၍ (၂) ပတ်လျှင် တစ်ကြိမ်ကျင်းပလျှက်ရှိ.....
ကျင်းပမည့်ရက် - 26.5.2011(Sat)
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း �Private Vs Public ICT Security & Personal Information Security and IT Skill Standards For IT Professionals (IPA)� ဟောပြောပွဲများ ကျင်းပမည် သတင်းအချက်အလက် နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင် အသင်း (MCPA) မှ ကြီးမှုး၍ ယနေ့ခေတ်အချက်အလက်နည်းပညာရပ်များ တိုးတက်အဆင့်မြှင့်လာခြင်း နှင့်အတူ User တစ်ဦးချင်းစီမှ အစပြု၍ ကွန်ယက်တစ်ခုလုံးတွင် မဖြစ်မနေဂရုတစိုက် ဆောင်ရွက်စီမံ .....
ကျင်းပမည့်နေရာ - အခန်း (၂၀၅)၊ မြန်မာအင်ဖိုတက်ခ်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မျြိ့။
World Top University List တွင် ပါဝင်ခဲ့သော JCU ဟောပြောပွဲ
2010 ခုနှစ် World Top Universities Academic စာရင်းတွင် World Top Rank ထဲတွင် ပါဝင်ခဲ့သော James Cook University (Singapore) ၏ ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲကို Smart Resources Education Centre ၌ မတ်လ (၂၃)ရက်နေ့ နံနက် (၁၀) နာရီမှ နေ့လည် (၁၂) နာရီ အထိပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပါကြောင်း .....
ကျင်းပမည့်ရက် - 23.3.2011(Mon)
ကျင်းပမည့်အချိန် - 10:00 am - 12:00 noon
ကျင်းပမည့်နေရာ - Smart Resources Education Centre
STI မှ ကြီးမှူး၍ သြစတြေးလျပညာရေးနှင့် ပညာသင်ဆုအကြောင်း ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပမည်
STI Education သည် ဒီပလိုမာ၊ အဆင့်မြင့် ဒီပလိုမာသင်တန်းများကို ပြည်တွင်း၌ပင် သင်ကြားနေရုံမျှမက ပြည်တွင်းရှိ ကျောင်းသားများ နိုင်ငံတကာ တက္ကသိုလ်များသို့ အဆင်ပြေချောမောစွာ တက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက် ဝန်ဆောင်မှုများ ဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိ်......
ကျင်းပမည့်ရက် - 28.3.2011(Mon)
ကျင်းပမည့်နေရာ - Traders Hotel (ကုန်းဘောင်၊ တကောင်းခန်းမ)
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း Developer Conference 2011 ကျင်းပရေးအကြိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း (MCPA) မှ ကြီးမှူးပြီး Developer Conference 2011 ကို ကွန်ပျူတာပညာရှင်များအတွင်း IT အသိပညာဗဟုသုတဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် အသိညာများကိုဖလှယ်ရန်၊ IT အသုံးချ Software ကောင်းများတီထွင်နိုင်သည့် Developer များပေါ်ထွက်လာစေရန်......
ကျင်းပမည့်ရက် - 25.3.2011(Fri)
ကျင်းပမည့်နေရာ - အခန်း (၂၀၅)၊ မြန်မာအင်ဖိုတက်ခါ၊ လှိုင်တက္ကသိုလ်နယ်မြေ။
"The Passport to Your Academic and Career Opportunities� ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပပြုလုပ်မည်
နိုင်ငံတကာတွင် သွားရောက်ပညာသင်ယူလိုသူ ကျောင်းသားများအတွက် လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သော အင်္ဂလိပ်စာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ IELTS ကို လေ့လာသင်ယူလိုသူများ များပြားလာ......
ကျင်းပမည့်ရက် - 24.3.2011(Thu)
ကျင်းပမည့်အချိန် - 10:00 am-1:00 pm
ကျင်းပမည့်နေရာ - မြေနီကုန်းပလာဇာ (ဒုတိယထပ်)၊ ဂမုန်းပွင့် နှင့် ဒဂုံစင်တာကြား၊ ဘားဂရာလမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်။
� မြန်မာနိုင်ငံမှကျောင်းသူကျောင်းသားများအတွက် ပထမဆုံး အမေရိကန်နှင့် နယူးဇီလန်များတွင် ယဉ်ကျေးမှု့ဆိုင်ရာ အတွေအကြုံ ရယူနိုင်မည့် ပညာသင်ကြားရေးအစီအစဉ်သစ်အကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားမည် � စွန့် ဦးတည်ထွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖြင့်ဖွဲ့ စည်းထားသော ERC Institute သည် စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိ Edu Trust (၄) နှစ် သက်တမ်းလက်မှတ် ရရှိထားသော ကျောင်းဖြစ်ပြီး......
ကျင်းပမည့်ရက် - 27.3.2011(Sun)
ကျင်းပမည့်အချိန် - 11:00-12:00 noon
ကျင်းပမည့်နေရာ - CROWN Education ရုံးခန်းတည်ရှိရာ၊ Summit Parkview Hotel, အခန်း(၂၂၈-၂၂၉)။
ICT-Laboratory �Using VM Ware� ခေါင်းစဉ်ဖြင့် လက်တွေ့စမ်းသပ်ပြုလုပ်မည် မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း(MCPA) သည် အသင်းသားများ၏ ICT ပညာရပ်ဆိုင်ရာ လက်တွေ့လေ့လာမှု များအား အထောက်အကူပြုနိုင်ရန် အတွက် လစဉ် LAB Schedule များရေးဆွဲ၍ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှုများကို ဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိ......
ကျင်းပမည့်ရက် - 26.3.2011(Sat)
ကျင်းပမည့်အချိန် - 1:00-5:00 pm
ကျင်းပမည့်နေရာ - MICT Park
Assumption University of Thailand ပညာရေးဟောပြောပွဲနှင့် Bachelor of Aeronautic Engineering Program မိတ်ဆက်ပွဲ
Assumption University ၏ ပညာရေးဟောပြောပွဲနှင့် Bachelor of Aeronautic Engineering program မိတ်ဆက်ပွဲကို မြန်မာနိုင်ငံ၏ တစ်ဦးတည်းကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သော KMD Computer Centre မှ အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း ကျင်းပ......
ကျင်းပမည့်အချိန် - 10:00-12:00 Noon
ကျင်းပမည့်နေရာ - Sedona Hotel (Mindom Room, Level II)
Nanyang Institute Management Seminar ပြုလုပ်ကျင်းပမည် စင်္ကာပူအစိုးရအသိအမှတ်ပြု Nanyang Institute Management တွင် Diploma In Construction Engineering ဘာသာရပ်အား စတင်သင်ယူနိုင်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း......
ကျင်းပမည့်ရက် - 27-3-2011(Sun)
ကျင်းပမည့်အချိန် - 3:00 pm - 6:00 pm
ကျင်းပမည့်နေရာ - TIPTOP: International Education Service Provider (ရန်ကုန်)
UWSB ကျောင်း ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲ မတ်လ ၁၉ ရက် Tip Top တွင်ကျင်းပမည်
Singapore နိုင်ငံ၏ Business School တစ်ခုဖြစ်သော United World School of Business မှ 2011 ဇူလိုင်လ Intake အတွက် ပညာသင်ဆုပေးအပ် ချီးမြှင့်ခြင်းနှင့် ပတ်သတ်ပြီး ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲအား TIPTOP: IESP တွင် မတ်လ(၁၉) ရက်နေ့ ၊နေ့လည် (၂) နာရီတိတိတွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည် ဖြစ်ကြောင်း......
ကျင်းပမည့်ရက် - 19.3.2011 (Sat)
ကျင်းပမည့်အချိန် - 2:00 pm ကျင်းပမည့်နေရာ - TIPTOP: International Education Service Provider (ရန်ကုန်)
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းဖြေဆိုပြီးသော ကျောင်းသားများအတွက် ပညာရေးအကြံပေးဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပမည်
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းဖြေဆိုပြီး ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက် ပညာရေးအကြံပေးဆွေးနွေးပွဲကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၉ ရက်၊ မွန်းလွဲ ၁းဝဝ နာရီမှ ၂းဝဝ နာရီ ထိ Nexus English Language Learning Centre တွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း......
ကျင်းပမည့်အချိန် - 1:00 pm - 2:00 pm
ကျင်းပမည့်နေရာ - Nexus English Language Learning Centre Read More��
BCA Academy မှ October Intake အတွက် ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲလာရောက်စစ်ဆေးမည်
စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ BCA Academy မှ October Intake အတွက် ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲကို လာရောက်စစ်ဆေးမည်ဖြစ်ရာ အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်ကို တက်ရောက်မည့် ကျောင်းသား ကျောင်းသူများအတွက် ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၃ ရက်တွင် BCA Academy မှ Examiner များကိုယ်တိုင်လာရောက် စစ်ဆေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ......
ကျင်းပမည့်ရက် - 2.4.2011 (Sat)
ကျင်းပမည့်နေရာ - Summit Parkview Hotel
School of Logistics & Supply Chain Management မှ ဒုတိယအကြိမ် ကြီးမှူးကျင်းပသော UK နိုင်ငံမှ စစ်ဆေးသည့် Diploma in Shipping Business (UK) အတွက် လိုအပ်သော ဘာသာရပ်များသင်ကြားပို့ချရန် အစီအစဉ်ကို မိတ်ဆက် ရှင်းလင်းတင်ပြ ......
ကျင်းပမည့်ရက် - 20.3.2011 (Sun)
ကျင်းပမည့်အချိန် - 6:00 pm - 8:00 pm
ကျင်းပမည့်နေရာ - Traders Hotel ၃-လွှာ (ကုန်းဘောင်/ တကောင်း) ခန်းမ။
UCSI University INFO Day ကျင်းပမည်
Synergy Education မှ ကြီးမှူးစီစဉ်သော မလေးရှားနိုင်ငံရှိ ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်သည့် UCSI University ၏ INFO Day ကို မတ်လ (၂၇) ရက် ၊ မနက် (၁၀) နာရီမှ ညနေ (၄) နာရီ အထိ ခြံအမှတ် (၅၂၀ / ဒီ -၁) ၊ ရွှေဂုံတိုင် ၊ ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ Synergy Education ရုံးခန်းတွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း ......
ကျင်းပမည့်ရက် - 27.3.2011 (Sun)
ကျင်းပမည့်အချိန် - 10:00 am - 4:00 pm
ကျင်းပမည့်နေရာ - ခြံအမှတ် (၅၂၀ / ဒီ -၁) ၊ ရွှေဂုံတိုင် ၊ ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ Synergy Education ရုံးခန်း။
Japan Education Seminar ကျင်းပမည် သတ္တမအကြိမ်မြောက် Japan Education Seminar ကို UMFCCI တွင် ၁၉ ရက် နံနက် (၉းဝဝ) နာရီတွင်ကျင်းပမည် ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါ Seminar အား Japanese Student Service Organization (JAS SO), MAJA, Japan Embassy တို့ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ကြောင်း......
ကျင်းပမည့်အချိန် - 9:00 am ကျင်းပမည့်နေရာ - UMFCCI
နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု ဘာသာရပ်များအကြောင်း စိတ်ဝင်စားသူများအတွက် ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲ
ကျင်းပမည့်ရက် - 11.3.2011 (Friday)
ကျင်းပမည့်အချိန် - 10:00 am � 12:00 noon
ကျင်းပမည့်နေရာ - OESC Seminar Hall
ICT-Laboratory �Service Oriented Architecture Implementing With Windows Communication Framework� ခေါင်းစဉ်ဖြင့် လက်တွေ့စမ်းသပ်ပြုလုပ်မည်
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း(MCPA) သည် အသင်းသားများ၏ ICT ပညာရပ်ဆိုင်ရာ လက်တွေ့လေ့လာမှုများအား အထောက်အကူ ပြုနိုင်ရန်အတွက် လစဉ် LAB Schedule များရေးဆွဲ၍ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှုများကို ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိ.......
ကျင်းပမည့်ရက် - 12.3.2011 (Sat)
ကျင်းပမည့်အချိန် - 1:00 pm - 5:00 pm
�ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ပညာရှင်များ၏ ဟောပြောပွဲဖိတ်ကြားခြင်း" ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ် (UMFCCI) ၊ ပြန်ကြားရေးနှင့် သတင်းနည်းပြညာမြှင့်တင်ရေး ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကော်မတီမှ ကျင်းပသည့် ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ပညာရှင်များ ဟောပြောပွဲ........
ကျင်းပမည့်ရက် - 5.3.2011 (Sat)
ကျင်းပမည့်အချိန် - 12:00 pm ကျင်းပမည့်နေရာ - UMFCCI အသင်းချုပ်ရုံး၊ မင်္ဂလာခန်းမ။
UK နှင့် USA ထိပ်တန်းအစိုးရတက္ကသိုလ်များတွင် Bachelor ဘွဲ့နှင့် Master ဘွဲ့များ တက်ရောက်သင်ယူနိုင်သည့် အထူးလမ်းကြောင်းများဆွေးနွေးတင်ပြပွဲ
Regent ပညာရေးကုမ္ပဏီမှ ကြီးမှူးစီစဉ်တဲ့ UK နဲ့ USA ရှိ နာမည်ကြီးတက္ကသိုလ်များတွင် တက်ရောက်နိုင်တဲ့ ပညာရေးလမ်းကြောင်းများကို UK နှင့် USA တက္ကသိုလ်များမှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များမှ လာရောက်ပြီး မတ်လ(၅) ရက်နေ့ ၊ စနေနေ့ ညနေ (၃) နာရီ မှ စတင်၍ Regent ပညာရေးကုမ္ပဏီတွင် ရှင်းလင်းတင်ပြမည်ဖြစ်ကြောင်း........
ကျင်းပမည့်အချိန် - 3:00 pm ကျင်းပမည့်နေရာ - Regent ပညာရေးကုမ္ပဏီ
ပညာရေး ကျန်းမာရေးနှင့် နေထိုင်မှုဆိုင်ရာပြပွဲ စာနယ်ဇင်းပွဲကျင်းပ
ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် နေထိုင်မှုဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီများနှင့် ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ ပါဝင်ပြသမည့် ပြပွဲကြီးတစ်ခုဖြစ်သော Education Living & Health Care Exhibition ပြပွဲကြီးအား Jade Crown Organizing Group မှ ကြီးမှုး၍ Shine Construction ၏ အဓိကကူညီပံ့ပိုးမှုဖြင့် Feb ၂၅ ရက်မှ ၂၈ ရက်နေ့အထိ ရန်ကုန်မြို့ ဦးဝိစာရလမ်းရှိ တပ်မတော်ခန်းမ၌ ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး နေ့စဉ် နံနက် ၉ နာရီမှ ညနေ ၅ နာရီအထိ ဖွင့်လှစ်ရောင်းချ........
ကျင်းပမည့်ရက် - 25.2.2011 - 28.2.2011 (Fri - Sun)
ကျင်းပမည့်အချိန် - 9:00 am - 5:00 pmကျင်းပမည့်နေရာ - ဦးဝိစာရလမ်းမပေါ်ရှိ တပ်မတော်ခန်းမ၊ ရန်ကုန်မြို့။
IELTS Exam အတွက် ပြင်ဆင်ရမည့်အချက်များ Seminar ကျင်းပမည် အမေရိကန်နိုင်ငံအပါအဝင် နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်များတွင် တက်ရောက်ပညာသင်ယူရန် အဓိက ဝင်ခွင့်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သော IELTS စာမေးပွဲဝင်ရောက်ဖြေဆိုရန် ပြင်ဆင်နေကြသော ကျောင်းသားများအတွက် IELTS စာမေးပွဲအကြောင်း........
ကျင်းပမည့်ရက် - 20.2.2011 (Sun)
ကျင်းပမည့်အချိန် - 11:00 am - 12:00 amကျင်းပမည့်နေရာ - မြေနီကုန်းပလာဇာ (ဒုတိယထပ်)၊ ဂမုန်းပွင့်နှင့် ဒဂုံစင်တာကြား၊ ဘားဂရာလမ်း၊ စမ်းချောင်းလမ်း။
ICT-Laboratory �Web Design� ခေါင်းစဉ်ဖြင့် လက်တွေ့စမ်းသပ်ပြုလုပ်မည် မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း(MCPA) သည် အသင်းသားများ၏ ICT ပညာရပ်ဆိုင်ရာ လက်တွေ့လေ့လာမှု များအား အထောက်အကူ ပြုနိုင်ရန်အတွက် လစဉ် LAB Schedule များရေးဆွဲ၍ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှုများကို ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိ........
ကျင်းပမည့်ရက် - 12.2.2011 (Sat)
ကျင်းပမည့်အချိန် - 1:00 pm - 5:00 pmကျင်းပမည့်နေရာ - MICT Park
� မြန်မာနိုင်ငံ၌ လူမှုရေး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ပြုစုမြှင့်တင်ရေး �
'' Promoting Social Businesses in Myanmar ''
ကျင်းပမည့်ရက် - 5.2.2011 (Sat)
ကျင်းပမည့်အချိန် - 2:00 pm ကျင်းပမည့်နေရာ - Myanmar Fisheries Federation, Bayintnaung Road, West Gyogone, Insein Township, Yangon.
�IELTS ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဖြေဆိုခြင်းနှင့် နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်များနှင့် IELTS အကြောင်းသိကောင်းစရာများကို ရှင်းလင်းပြောကြားမည်� IELTS စာမေးပွဲနှင့်ပတ်သက်၍ သိကောင်းစရာများ၊ ကျောင်းသူကျောင်းသားများ၏ ပညာရေးလမ်းကြောင်းအတွက် IELTS ဖြေဆိုရန်ပြင်ဆင်ရာတွင် သတိပြုရမည့်အချက်များ၊ နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်များနှင့် IELTS အကြောင်းသိကောင်းစရာများကို ဗြိတိသျှကောင်စီ Exam Services မှ တာဝန်ရှိသူ ကိုယ်တိုင် ၂၀၁၁၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၁၁) ရက် (သောကြာနေ့) တွင်၊ ရန်ကုန်မြို့ အလုံလမ်းရှိ၊ Summit Parkview Hotel တွင်ကျင်း ပပြုလုပ်မည့် Singapore Education Road Show 2011 တွင်ရှင်းလင်းပြောကြား....
ကျင်းပမည့်ရက် - 11.2.2011 (Fri)ကျင်းပမည့်နေရာ - Summit Parkview Hotel
� Double Major ရယူနိုင်သော သြစတြေးလျ ဘွဲ့ များအကြောင်းနှင့် အထူးပြုဘာသာဖြင့် တက်ရောက်နိုင်မည့် MBA ဘွဲ့ဝင်ခွင့်များအကြောင်း James Cook University မှရှင်းလင်းပြောကြားမည်� နိုင်ငံတကာတွင် အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရာတွင်ပိုမိုအထောက်အကူပြုနိုင်သော အထူးပြုဘာသာရပ်နှစ်မျိုးရယူနိုင်သည့် သြစတြေလျဘွဲ့ များ အကြောင်း နှင့် Finance & Accounting, Marketing, Human Sources Management များကို အထူးပြု ဘာသာရပ်အဖြစ်ရယူနိုင်သော MBA ဘွဲ့များအကြောင်း....
� အင်္ဂလန်မှချီးမြင့်မည့်၊ Electronic Engineering ဘာသာရပ်များ၊ Computer Network & Communication Technology ဘာသာရပ်များအကြောင်းနှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများအကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားမည် � အင်္ဂလန်မှချီးမြင့်မည့်၊ Electrical and Electronic Engineering ဘာသာရပ်များ၊ Computer Network and Communication Technology ဘာသာရပ်များ၊ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ ရများအတွက် MBA ဘာသာရပ်နှင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများအကြောင်း ကိုဖေဖေါ်ဝါရီ (၁၁) ရက် Summit Parkview Hotel တွင်ကျင်းပမည့် Singapore Education Road Show 2011 တွင်ရှင်းလင်းပြောကြား....
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း ICT-Laboratory �Web Hosting� ခေါင်းစဉ်ဖြင့် လက်တွေ့စမ်းသပ်ပြုလုပ်မည် မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း(MCPA) သည် အသင်းသားများ၏ ICT ပညာရပ်ဆိုင်ရာ လက်တွေ့လေ့လာမှုများအား အထောက်အကူ ပြုနိုင်ရန်အတွက် လစဉ် LAB Schedule များရေးဆွဲ၍ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှုများကို ဆောင်ရွက် ပေးလျက်ရှိ.....
STI မှ အောင်လက်မှတ် ပေးအပ်ပွဲနှင့် ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပမည်
STI Education သည် နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု အောင်လက်မှတ်များ၊ ဒီပလိုမာ၊ အဆင့်မြင့် ဒီပလိုမာများနှင့် လုပ်ငန်းခွင်အရာရှိအဆင့် ဒီပလိုမာသင်တန်းများကို ဘာသာရပ် နယ်ပယ်အသီးသီးဖြင့် သင်ကြားပေး လျှက်ရှိ.....
ကျင်းပမည့်ရက် - 13.2.2011 (Sat)
ကျင်းပမည့်အချိန် - 10:00 am - 12:00 pmကျင်းပမည့်နေရာ - MICT Park
ဆရာဦးအေးကျော် (MHR) Seminar ဟောမည်
မြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်ကြီးများနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ် (UMFCCI) မှ ကြီးမှူးကျင်းပသော ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ပညာရှင်ဟောပြောပွဲကို ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၅) ရက်နေ့ နေ့လယ် ၂ နာရီတွင် မင်းရဲကျော်စွာလမ်း၊ UMFCCI ရုံး၌ ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး စိတ်ပါဝင်စားသူမည်သူမဆို အခမဲ့တက်ရောက် နိုင်ကြောင်း.....
ကျင်းပမည့်အချိန် - 2:00 pmကျင်းပမည့်နေရာ - မင်းရဲကျော်စွာလမ်း၊ UMFCCI ရုံး။
UK ပညာရေး နှင့် IELTS စာမေးပွဲအကြောင်း ဟောပြောပွဲများ အခမဲ့ တက်ရောက်နိုင်
UK တွင် ပညာသင်ကြားရန် စိတ်ဝင်စားသောကျောင်းသားများ၊ မိမိတို့သား၊သမီးများအား UK သို့ ပို့လွှတ်လိုသော မိဘများနှင့် IELTS စာမေးပွဲ အကြောင်း.....
ကျင်းပမည့်ရက် - 19.2.2011 (Sat)
ကျင်းပမည့်အချိန် - Studying in the UK (နံနက် ၁၀ နာရီမှ ၁၂ နာရီ)၊ Overview of IELTS Exam (၁၂နာရီမှ နေ့လယ် ၁ နာရီ)ကျင်းပမည့်နေရာ - ကုန်းဘောင်တကောင်း ခန်းမ၊ ကုန်သည်ကြီးများ ဟိုတယ်၊ ရန်ကုန်။
မြန်မာ့စီးပွားရေး အလားအလာအကြောင်း ဟောပြောပွဲကျင်းပမည်
knowledge bridge magazine မှကြီးမှူးပြီး main sponsor အဖြစ် ထက်လင်းတိုင်းရင်းဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေး co sponsor များအဖြစ်......
ကျင်းပမည့်အချိန် - 2:00 pm - 4:00 pmကျင်းပမည့်နေရာ - knowledge bridge magazine တိုက် အာရှပလာဇာ (မြေညီထပ်)၊ အမှတ်(25)၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း(အထက်)၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
SCHOOL LEADERSHIP AND EFFECTIVE SCHOOLS � A TWO-DAY WORKSHOP FOR SCHOOL PRINCIPALS, DEPARTMENT HEADS AND SENIOR TEACHERS ကျင်းပမည့်ရက် - 19/20.2.2011 (Sun)
ကျင်းပမည့်အချိန် - 8:30 am - 4:00 pmကျင်းပမည့်နေရာ - Noble Management Academy Function Hall, 220-220, SILA 3rd Flr, Botahtaung Pagoda Rd
� Effective Learning for Science and Engineering � အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ
Noble Management Academy မှ ကြီးမှူး၍ ကျင်းပသော တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း ဖြေဆိုမည့်သူများ၊ အောင်မြင်ပြီးသူများ၊ GTC ပထမနှစ်သင်တန်း တက်ရောက် နေသူများ၊ GCE (O) (A) တက်ရောက်နေသူများ၊ အောင်မြင်ပြီးသူများအတွက် Workshop on �Effective Learning for Science and Engineering� အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့ ပါဝင်ဆွေးနွေးတက်ရောက်ရန်......
ကျင်းပမည့်ရက် - 13.2.2011 (Sun)
ကျင်းပမည့်အချိန် - 8:00 am - 5:00 pmကျင်းပမည့်နေရာ - Noble Management Academy, No.220-222, SILA 3rd Floor, Botahtaung Pagoda Rd. Pazundaung Tsp, Yangon.
MCPA မှ လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်မည် မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှ Demonstration of Cisco devices password hacking and Cisco IOS Backup Restore ခေါင်းစဉ်ဖြင့် လက်တွေ့စမ်းသပ်ပြုလုပ်ခြင်းကို ဇန်နဝါရီလ (၂၉) ရက် နေ့လည် (၁) နာရီမှ (၅) နာရီအထိ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း......
ကျင်းပမည့်ရက် - 29.1.2011 (Sat)
Assumption University of Thailand ပညာရေးဟောပြောပွဲ Assumption University ပညာရေးဟောပြောပွဲကို မြန်မာနိုင်ငံ တစ်ဦးတည်းကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သော KMD Computer Centre မှ အောက်ပါ အစီအစဉ် အတိုင်း ကျင်းပပြုလုပ်မည်...
ကျင်းပမည့်အချိန် - 2:00 pm - 4:00 pmကျင်းပမည့်နေရာ - KMD Myaynigone Centre (Lecture Room 1)
�မူလတန်းနှင့်အလယ်တန်းအဆင့် (Primary/Secondary) စင်္ကာပူအစိုးရကျောင်းဝင်ခွင့် ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်းဝင်ခွင့် ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် AEIS ၀င်ခွင့်စာမေးပွဲများဖြေဆိုခြင်း အကြောင်း...
ကျင်းပမည့်ရက် - 11.2.2011 (Thu)ကျင်းပမည့်နေရာ - အလုံလမ်းရှိ Summit Parkview ဟိုတယ် Read More��
SAA Global Education မှ ရာနှုန်းပြည့်ပညာသင်ဆုနှင့် UK Diploma ရရှိနိုင်မည့် ဘာသာရပ် အသစ်အကြောင်းဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်မည် စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ SAA Global Education မှ ရာနှုန်းပြည့်ပညာသင်ဆုလျှောက်ထားနိုင်သော စာရင်းကိုင်ဘာသာရပ်နှင့် တစ်နှစ် အတွင်း UK Diploma ရရှိနိုင်မည့် ဘာသာရပ်အသစ်အကြောင်းဆွေးနွေးပေးမည့် ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၂ ရက်၊ နံနက် ၉ နာရီခွဲမှ ၁၁ နာရီခွဲ အထိ ရန်ကုန်မြို့၊ Traders Hotel, Bagan Room တွင် ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း....
ကျင်းပမည့်ရက် - 22.1.2011 (Sat)
ကျင်းပမည့်အချိန် - 9:30 am - 11:30 amကျင်းပမည့်နေရာ - Traders Hotel, Bagan Room
�စင်္ကာပူအစိုးရ ပိုလီများနှင့် တက္ကသိုလ်များသို့ ၀င်ခွင့်လျှောက်ထားနိုင်သော Singapore-Cambridge GCE �O� နှင့် GCE �A� ပြင်ဆင်ခြင်းအကြောင်း ဟောပြောမည်� အစိုးရေ�စင်္ကာပူအစိုးရ ပိုလီများနှင့် တက္ကသိုလ်များသို့ ၀င်ခွင့်လျှောက်ထားနိုင်သော Singapore-Cambridge GCE �O� နှင့် GCE �A� ပြင်ဆင်ခြင်းအကြောင်း ဟောပြောမည်� အစိုးရကျောင်းများသို့ ၀င်ခွင့်လျှောက်ထားနိုင်သော Singapore-Cambridge GCE �O� နှင့် GCE �A� ပြင်ဆင် ခြင်း အကြောင်းများကို Shelton College International မှ တာဝန်ရှိသူများက ဖေဖေါ်ဝါရီ (၁၁) ရက် သောကြာနေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့ အလုံလမ်းရှိ၊ Summit Parkview Hotel တွင်ကျင်ပမည့် Education Road Show 2011 တွင် လာရောက်ရှင်း လင်းပြောကြားမည်ဖြစ်ကြောင်း....
ကျင်းပမည့်ရက် - oice ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲ အခမဲ့တက်ရောက်နိုင် ERC Institute offers Diploma, Bachelor & Master Programmes in areas of:....
ကျင်းပမည့်ရက် - 15.1.2011 (Sat)
ကျင်းပမည့်အချိန် - 2:00 pm - 5:00 pmကျင်းပမည့်နေရာ - Rayworld Complex, 4th Floor, Skylink Hall, 32th x Zawtika St, 77th x 78th, Mandalay.
မြန်မာနိုင်ငံမှ ဒီဇိုင်းပညာနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ဝင်စားသူလူငယ်များအတွက် Raffles College of Design & Commerce မှစီစဉ်ပြုလုပ်သော ဒီဇိုင်းပညာလက်တွေ့ အသုံးချမှုဆွေးနွေးပွဲကို ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၆ ရက်တွင် မန္တလေးမြို့၊ Hotel Mandalay တွင် နံနက် ၉ နာရီမှ နေ့လည် ၁၂ နာရီအထိ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း....
ကျင်းပမည့်ရက် - 16.1.2011 (Sun)
ကျင်းပမည့်အချိန် - 9:00 am - 12:00 pmကျင်းပမည့်နေရာ - Hotel Mandalay, မန္တလေးမြို့။
စင်္ကာပူအစိုးရတက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်သော Nanyang Technological University မှ မာစတာ ပရိုဂရမ်များ လျှောက်ထားခြင်း နှင့် ၀င်ခွင့်အကြောင်း ရှင်းလင်းမည်
နန်းယန်းတက္ကနော်လောဂျီယူနီဗာစတီဟာ စင်္ကာပူအစိုးရတက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၂၀၁၁ သြဂုတ်လ စာသင်နှစ်အတွက်၊ ဘွဲလွန်သင်တန်းတွေကို စတင် လျှောက်ထားနိုင်ပြီး ၀င်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့ အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို ဇန်န၀ါရီ (၁၅) ရက် မနက် (၁၀) နာရီက (၁၁)နာရီအထိ CROWN Education ရုံးခန်း မှာရှင်းလင်းပြောကြားမယ်လို့ သိရ....
ကျင်းပမည့်အချိန် - 10:00 am - 11:00 amကျင်းပမည့်နေရာ - CROWN Education
Coventry University ၏အင်ဂျင်နီယာ (Hons) နှင့် မဟာအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ရယူနိုင်မည့် လမ်းကြောင်းများမိတ်ဆက်ပွဲနှင့် စာရေးဆရာအော်ပီကျယ်၏ � ဟားဗတ်မှာတွေးမိသမျှ � ခေါင်းစဉ်ဖြင့်ဟောပြောပွဲကျင်းပမည် Coventry University ၏ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့နှင့် မဟာအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ရယူနိုင်မည့် အစီအစဉ်များကို GALLANT သင်တန်းကျောင်းမှ Programm (3) ခုခွဲ၍ စီစဉ်ပေးမှာဖြစ်ပါသည်။ ဆယ်တန်းအောင်မြင်ပြီးအဆင့်ဖြင့် အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ BA (Hons) ရယူနိုင်မည့် Programm (1) နှင့် BE, AGTI, B.Tech နှင့် City & Guilds ဘွဲ့ ဒီပလိုမာရရှိထားပြီး....
ကျင်းပမည့်ရက် - 13.1.2011 (thu)
ကျင်းပမည့်အချိန် - 9:00 am - 12:00 pmကျင်းပမည့်နေရာ - International Business Centre (IBC) ပြည်လမ်း၊ (၆) မိုင်ခွဲ၊ လှိုင်မြို့နယ်။
ICT-Laboratory �Software Testing Workshop� ခေါင်းစဉ်ဖြင့် လက်တွေ့စမ်းသပ်ပြုလုပ်မည်
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း (MCPA) သည် အသင်းသားများ၏ ICT ပညာရပ်ဆိုင်ရာ လက်တွေ့ လေ့လာ မှုများအား အထောက်အကူပြုနိုင်ရန် အတွက် လစဉ် LAB Schedule များရေးဆွဲ၍ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှုများကို ဆောင်ရွက် ပေးလျက်ရှိ....
ကျင်းပမည့်ရက် - 8.1.2011 (Sat)
London Hotel School College မှ ဟော်တယ်လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်မည်
London Hotel School College မှ ဟော်တယ်လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်မည် ဖြစ်ကြောင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် Star Resources မှသိရသည်။ အဆိုပါ ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲတွင် London Hotel School College မှ ကျောင်းအုပ် Mr.Roderick Hardingham ကိုယ်တိုင် လာရောက် ဆွေးနွေးမည်ဖြစ်ကြောင်း.....
ကျင်းပမည့်ရက် - 15.1.2011 (Wed)
ကျင်းပမည့်နေရာ - Traders Hotel ၊ ရန်ကုန်မြို့။
Interactive Media ဘာသာရပ်အကြောင်းနှင့် စင်ကာပူပညာရေးအကြောင်း ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်မည်
UK မှ ပေးအပ်ချီးမြှင့်မည့် UK (BTEC) Higher National Diploma in Interactive Media နှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်အကြောင်းအရာများနှင့် စင်ကာပူ ပညာရေးအကြောင်းရှင်းလင်းဆွေးနွေးမည့် ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲကို ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက် နံနက် ၁ဝ နာရီမှ နေ့လယ် ၁၂ နာရီ အထိ OESC Seminar Room တွင်ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း.....
ကျင်းပမည့်ရက် - 1.1.2011 (Sat)
ကျင်းပမည့်အချိန် - 10:00 am - 12:00 pmကျင်းပမည့်နေရာ - OESC Seminar Room
မိဘ၊ ဆရာ၊ ကျောင်းသားလူငယ်များ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ဆိုင်ရာ ပညာရေးဟောပြောပွဲ မိဘ၊ ဆရာ၊ ကျောင်းသား၊ ပညာရေးသုတစုပေါင်း ကျောင်းသား အနာဂတ်ကောင်း � နိုင်ငံတကာပညာရေးကို ပြည်တွင်းပြည်ပတွင် ထူးချွန်စွာ သင်ယူနိုင်ရန်၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းကောင်းများ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ရန်နှင့် ခိုင်မာသော ဘ၀အာမခံချက် ရရှိနိုင်ရန်အတွက် မိဘ၊ ဆရာ၊ ကျောင်းသား လူငယ်များ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု ဆိုင်ရာ ပညာရေးဟောပြောပွဲ�.....
ကျင်းပမည့်ရက် - 26.12.2010 (Sun)
ကျင်းပမည့်အချိန် - 2:00 pm - 4:00 pmကျင်းပမည့်နေရာ - အစည်းအဝေးခန်းမ၊ ဂရင်းမီးရထားဟိုတယ် အမှတ် ၃၂၇၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ Read More��
Star Resources မှ ကြီးမှုး၍ ပညာရေးဟောပြောပွဲကျင်းပမည် Star Resources မှ ကြီးမှုး၍ ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲ တစ်ရပ်ကို ဇန်နဝါရီ ၁၅ ရက် စနေနေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့ ဆူးလေဘုရားလမ်းပေါ်ရှိ Traders Hotel တွင်နံနက် ၁၀ နာရီတွင် လည်းကောင်း၊ ဇန်နဝါရီ ၁၆ ရက်နေ့ တနင်္ဂနွေနေ့တွင် မန္တလေးမြို့ Sedona Hotel တွင်နံနက် ၁၀ နာရီတွင်လည်းကောင်း အသီးသီးကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း.....
ကျင်းပမည့်ရက် - 16.1.2010 (Sun)
ကျင်းပမည့်အချိန် - 10:00 am ကျင်းပမည့်နေရာ - Sedona Hotel
Taylor's University ၏ ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲ မလေးရှားနိုင်ငံရှိ Taylor's University ၏ ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲကို လာမည့် ဒီဇင်ဘာလ (၁၉) ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့၊ မနက်(၁၀) နာရီ တွင် အမှတ်(၅၂၀/D-1)၊ ရွှေဂုံတိုင် ၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ရှိ Synergy Education ရုံးခန်းတွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး Taylor's University မှ မန်နေဂျာ Tan Yih Tang နှင့် Ms. Theresa Soh Peck Boon တို့က အသေးစိတ် ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း.....
ကျင်းပမည့်ရက် - 21.12.2010 (Tue)
ကျင်းပမည့်နေရာ - Synergy Education Office
မလေးရှားနိုင်ငံရှိ KDU University College ၏ ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲ
Synergy Education မှ ကြီးမှူးကျင်းပသော မလေးရှားနိုင်ငံရှိ KDU University College ၏ ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲကို လာမည့် ဒီဇင်ဘာလ (၂၁) ရက် (အင်္ဂါနေ့)၊ မနက် (၁၀)နာရီတွင် အမှတ်(၅၂၀/ D-1)၊ ရွှေဂုံတိုင်ရှိ Synergy Education ရုံခန်းတွင်ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း.....
ကျင်းပမည့်ရက် - 18.12.2010 (Sat)
ကျင်းပမည့်နေရာ - MSI Office
AUSTRALIAN EDUCATION WEEK@YIUS
အခြေခံပညာအထက်တန်း (သို့) အောင်မြင်ပြီးသူတိုင်း သြစတြေးလျနိုင်ငံအသိအမှတ်ပြု တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်သင်တန်း Australian Foundation Course & Pre-University English Courses ကို မြန်မာနိုင်ငံရှိ YIUS ကျောင်းတွင် January 2011 မှစ၍ တက်ရောက်နိုင်ပြီဟုသိရ.....
ကျင်းပမည့်ရက် - 20 to 24.12.2010 (Mon to Fri)
ကျင်းပမည့်အချိန် - 10:00 am - 3:00 pm
ကျင်းပမည့်နေရာ - Bldg 7, Rm 4, Myanmar Info-Tech, Hlaing University Campus, Hlaing Tsp, Yangon.
STI မှ � Fundamentals of Business Presentation Sills� အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပမည် လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့် စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများအကြား ပြောဆိုဆက်သွယ်ခြင်းသည် လူတစ်ဦး၏ အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍတစ်ရပ် ဖြစ်ပါတယ်။ သို့ရာတွင် ပြောဆိုဆက်သွယ်မှုပညာကို လူနည်းစုသာ ကျွမ်းကျင်၍ အများစုမှာ.....
ကျင်းပမည့်ရက် - 18/19.12.2010 (Sat,Sun)
ကျင်းပမည့်နေရာ - STI Education ရှိရာ အဆောင်(၄)၊ အခန်း(၇)၊ Myanmar Info-Tech ၊ လှိုင်မြို့နယ်။
STI မှ Effective Communication in Today�s Business World� အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပမည် လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့် စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများအကြား ပြောဆိုဆက်သွယ်ခြင်းသည် လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍတစ်ရပ် ဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် ပြောဆိုဆက်သွယ်မှုပညာကို လူနည်းစုသာ ကျွမ်းကျင်၍ အများစုမှာ ကျွမ်းကျင်မှုအားနည်း၍ လုပ်ဆောင်ချက်များအောင်မြင်မှု .....
Practical On Wireless Network Installation, Configuration ခေါင်းစဉ်ဖြင့် လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်မည်
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှ Practical On Wireless Network Installation, Configuration ခေါင်းစဉ်ဖြင့်လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်ခြင်းကို ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက်နေ့လည် ၁ နာရီမှ ၅ နာရီ အထိပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း.....
ကျင်းပမည့်ရက် - 12.12.2010 (Sun)
ကျင်းပမည့်အချိန် - 1:00 am to 5:00 pm
Accounting On-Job Training အတွက်ဟောပြောပွဲ ကျင်းပမည် စာရင်းကိုင်ပညာနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုလိုသူများ၊ B.com, LCCI Level � I and II or Level II or Level III, ACCA Part 1 နှင့် Business Management အောင်မြင်ပြီး လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံမရှိသေးသူများအတွက် MBC သင်တန်းကျောင်းမှ ထပ်မံဖွင့်လှစ်လိုက်သော Accounting On-Job Training သင်တန်းအကြောင်း ဟောပြောမည်ဖြစ်ပြီး.....
ကျင်းပမည့်ရက် - ၂ဝ၁ဝ ဒီဇင်ဘာလ (၅) ရက်
ကျင်းပမည့်အချိန် - တနင်္ဂနွေနေ့ မနက် (၉းဝဝ) မှ (၁ဝးဝဝ)
ကျင်းပမည့်နေရာ - MBC သင်တန်းကျောင်း
Read More�� �ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ပညာရှင်များ၏ ဟောပြောပွဲဖိတ်ကြားခြင်း�
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ် (UMFCCI) ၊ ပြန်ကြားရေးနှင့် သတင်းနည်းပညာမြှင့်တင်ရေး ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကော်မတီမှ ကျင်းပသည့် ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ပညာရှင်များဟောပြောပွဲများကို ၂ဝဝ၇ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၅) ရက်နေ့မှစတင် ကျင်းပခဲ့.....
ကျင်းပမည့်ရက် - ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၄) ရက် (စနေနေ့)။
ကျင်းပမည့်အချိန် - ဝ၉း၃ဝ နာရီ
လမ်းမတော်မြို့နယ်။ ဖုန်း - ၂၁၄၃၄၄/၅/၆/၇/၈/၉
Kaplan Education Info-talk Article
ကျင်းပမည့်ရက် - 9.12.2010 (Thu)
ကျင်းပမည့်အချိန် - 1:30 pm - 2:30 pm
ကျင်းပမည့်နေရာ - MSI Office Read More��
International Education Day @ CROWN နိုင်ငံတကာပညာရေးအကြောင်းရှင်းလင်းဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်မည် နိုင်ငံတကာပညာရေးကို စိတ်ဝင်စားသူ ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက် ရည်ရွယ်၍ CROWN Education Day @ CROWN နိုင်ငံတကာပညာရေး ဆွေးနွေးပွဲကို ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၄ ရက်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း.........
ကျင်းပမည့်ရက် - 4.12.2010 (Sat)
ကျင်းပမည့်အချိန် - 10:00 am - 6:00 pm
ကျင်းပမည့်နေရာ - CROWN Education ရုံးခန်း၊ Summit Parkview Hotel ၊ အခန်းနံပါတ် - 228/229 Read More��
ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာပညာရှင်များ ဟောပြောပွဲ ဖိတ်ကြားလွှာ
မြန်မာနိုင်ငံငါးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ် နှင့် မြန်မာနိုင်ငံပုစွန်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းတို့ ပူးပေါင်းကျင်းပသည့် ဟောပြောပွဲများကို ၂ဝဝ၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၇) ရက်နေ့မှစ၍ (၂) ပတ်လျှင် တစ်ကြိမ်ကျင်းပလျှက်ရှိ.........
ကျင်းပမည့်ရက် - 13.11.2010 (Sat)
ကျင်းပမည့်နေရာ - မြန်မာနိုင်ငံငါးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်၊ ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီးနှင့် စက်မှုဆေးဝါးလမ်းထောင့်၊ အနောက်ကြို့ကုန်း၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။
ICT- Laboratory �Guide To Build A Network by Cisco Switch and Router� ခေါင်းစဉ်ဖြင့် လက်တွေ့စမ်းသပ်ပြုလုပ်မည် မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း (MCPA) သည် အသင်းသားများ၏ ICT ပညာရပ်ဆိုင်ရာလက်တွေ့လေ့လာမှုများ အားအထောက်အကူ ပြုနိုင်ရန်အတွက် လစဉ် LAB Schedule များရေးဆွဲ၍ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှုများကို ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိကြောင်း .........
ကျင်းပမည့်ရက် - 12.11.2010 (Fri)
ကျင်းပမည့်နေရာ - ရန်ကုန်မြို့ လှိုင်မြို့နယ် Myanmar- Info Tech
Device Business Management Academy မှ ကြီးမှုး၍ National Council of Physical Distribution Management �၂၁ ရာစု လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုလုံး၏ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု� သင်တန်းဖွင့်လှစ်ကျင်းပမည် Device Business Management Academy မှ ကြီးမှုးကျင်းပသည့် Tetra Month Training Ptogram ၏ အဌမမြောက်သင်တန်းဖြစ်သော National Council of Physical Distribution Management သင်တန်းကို ၂၀၁၀ နိုဝင်ဘာ ၁၃ ၊ ၁၄ ရက်များတွင် ရန်ကုန်မြို့ လှိုင်မြို့နယ် Myanmar- Info Tech ၌ နံနက် ၉ နာရီမှ ညနေ ၅ နာရီအထိဖွင့်လှစ်သင်ကြားမည်ဖြစ်ကြောင်း.........
ကျင်းပမည့်ရက် - 13/14.11.2010 (Sat,Sun)
ကျင်းပမည့်အချိန် - 9:00 am to 5:00 pm
ကျင်းပမည့်ရက် - 30.10.2010 (Sat)
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း �Internet Resource Management Essentials� ဟောပြောပွဲကျင်းပမည်
သတင်းအချက်အလက် နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာ ပညာရှင်အသင်းမှ ကြီးမှူး၍ Domain Name Server Security နှင့် Internet Routing ဆိုင်ရာ နည်းပညာအသစ်များကို သိရှိလာစေရန်.....
ကျင်းပမည့်ရက် - 27.10.2010 (Wed)
ကျင်းပမည့်အချိန် - 9:00 am to 12:00 pm
ကျင်းပမည့်နေရာ - အခန်း (၂ဝ၅) ၊ ပင်မဆောင်ရှိ ၊ မြန်မာအင်ဖိုတက်ခ် ၊ လှိုင်မြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့။
နိုင်ငံတကာကျောင်းပေါင်းစုံ ပညာရေး ပြပွဲကြီး
STUDY ABROAD မှ ကြီးမှုးစီစဉ်၍ UK, USA, CANADA, SINGAPORE နိုင်ငံကြီးများရှိ NAVITAS Education ၏ နာမည်ကြီး တက္ကသိုလ်များမှ လာရောက်ပြသမည့် နိုင်ငံတကာ ပညာရေးပြပွဲကြီးကို ယခုလာမည့် အောက်တိုဘာ (၃၁) ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့၊ TRADERS HOTEL, Level3ကုန်းဘောင်-တကောင်း ခန်းမတွင် နံနက် (၁ဝ) နာရီမှ ညနေ (၄) နာရီထိ ပြသပေးသွားမည်.....
ကျင်းပမည့်ရက် - 31.10.2010 (Sun)
ကျင်းပမည့်အချိန် - 10:00 am to 4:00 pm
ဒီဇိုင်းဝါသနာရှင်များအတွက် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပမည်
ဒီဇိုင်းဝါသနာရှင်များနှင့် စီးပွားရေး ပညာရပ်ကို စိတ်ဝင်စားသူများအတွက် Basic Drawing Skills For All Designers နှင့် Lego Manufacturing Game ခေါင်းစဉ်ဖြင့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်၊ နေ့လယ် ၁ နာရီမှ ၄ နာရီထိ ပါ့ခ်ရွိုင်ရယ်ဟိုတယ်၌ ကျင်းပမည်ဟု Raffles ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုမှသိရ.....
ကျင်းပမည့်အချိန် - 1:00 pm to 4:00 pm
မြန်မာစာယူနီကုတ်(Open Type Font) တည်ဆောက်ခြင်း အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပမည်
သတင်းအချက်အလက် နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း (MCPA) မှ ကြီးမူး၍ Myanmar Information Technology Pte Ltd (MIT) ၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုဖြင့် ကွန်ပျူတာသုံး မြန်မာဘာသာစကား အကောင်အထည်ဖေါ်ရေးအဖွဲ့ (Myanmar NLP) မှပညာရှင်များနှင့် အခြားပညာရှင်များမှ မြန်မာစာယူနီကုတ် တည်ဆောက်ခြင်း.....
ကျင်းပမည့်ရက် - 16.10.2010 / 17.10.2010(Sat, Sun)
ကျင်းပမည့်အချိန် - 9:30 am to 5:00 pm
ကျင်းပမည့်နေရာ - ရန်ကုန်မြို့၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ မြန်မာအင်ဖိုတက်ခ်၊ အခန်း(၂၀၅)
�ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ပညာရှင်များ၏ ဟောပြောပွဲဖိတ်ကြားခြင်း�
မြန်မာနိုင်ငံငါးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံပုစွန်လုပ်ငန်းများအသင်းတို့ ပူးပေါင်းကျင်းပသည့် ဟောပြောပွဲများကို ၂ဝဝ၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ၊ (၇) ရက်နေ့ မှစ၍ (၂)ပတ်လျှင် တစ်ကြိမ်ကျင်းပလျှက်.....
ကျင်းပမည့်ရက် - 9.10.2010 (Sun)
ကျင်းပမည့်နေရာ - မြန်မာနိုင်ငံငါးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်၊ ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီးနှင့်
စက်မှုဆေးဝါးလမ်းထောင့်၊ အနောက်ကြို့ကုန်း၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။
Taylor's University College ၏ ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲ
မလေးရှားနိုင်ငံရှိ Taylor's University College ၏ ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲ နှင့် တစ်ဦးချင်းဆွေးနွေးပေးမည့် အစီအစဉ်ကို လာမည့် အောက်တိုဘာလ (၁၇) ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့ မနက်(၁၀) နာရီ မှ နေ့လည် (၂) နာရီအထိ အမှတ်(၅၂၀/D-1)၊ ရွှေဂုံတိုင် ၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ရှိ Synergy Education ရုံးခန်းတွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး Taylor's University College မှ Mr. Hoh Lee Cen နှင့် Ms. Theresa Soh Peck Boon တို့က အသေးစိတ် ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း.....
ကျင်းပမည့်ရက် - 17.10.2010 (Sun)
ကျင်းပမည့်အချိန် - 10:00 am to 2:00 pm
ကျင်းပမည့်နေရာ - အမှတ်(၅၂၀/D-1)၊ ရွှေဂုံတိုင် ၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ရှိ Synergy Education
နယူဇီလန်နိုင်ငံတွင် ပညာသင်ကြားနိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းများအကြောင်း Seminar ပြုလုပ်မည် နယူးဇီလန်နိုင်ငံ University of Auckland တွင်ပညာသင်ကြားနိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းများအကြောင်း ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲ (Seminar) ကို အောက်တိုဘာ ၂၄ ရက်နေ့တွင် ကုန်သည်ကြီးများဟိုတယ်တွင်ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း.....
ကျင်းပမည့်ရက် - 24.10.2010 (Sun)
ကျင်းပမည့်နေရာ - Trader Hotel Read More��
SMU ၏ ပညာရေးဟောပြောပွဲနှင့် ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲကျင်းပမည် Singapore Management University (SMU) တွင် ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံများနှင့် တိုက်ရိုက်တွေ့ဆုံ၍ ပညာရေးဟောပြောပွဲနှင့် ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲကို Park Royal Hotel Ballroom တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း.....
ကျင်းပမည့်ရက် - 16.10.2010 (Sat)
4:00 pm to 6:00 pm ကျင်းပမည့်နေရာ - Park Royal Hotel Ballroom
GCE မှ IGCSE သို့ပြောင်းလဲမှုအကြောင်းဟောပြောပွဲကျင်းပမည် GCE မှ London Edexcel IGCSE သို့ပြောင်းလဲမှုအကြောင်းဟောပြောပွဲကို အောက်တိုဘာလ ၈ ရက်နေ့လည် ၂းဝဝ နာရီ မှ ၄းဝဝ နာရီအထိ Traders Hotel ကုန်းဘောင်၊ တကောင်းခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း.....
ကျင်းပမည့်ရက် - 8.10.2010 (Fri)
2:00 pm to 4:00 pm ကျင်းပမည့်နေရာ - Traders Hotel ကုန်းဘောင်၊ တကောင်းခန်းမ
UNITEDWORLD School of Business (UWSB) ၏ ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲ
UK ရှိ University of Bolton မှ ချီးမြှင့်သော MBA ဘွဲ့နှင့် The Association of Business Practitioners (ABP) မှ ချီးမြှင့်သော စီးပွားရေးဘွဲ့လွန် ဒီပလိုမာကို တက်ရောက်လိုသူများအတွက် ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲကို လာမည့်အောက်တိုဘာလ (၁၀) ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့ မနက်(၁၀) နာရီ မှ နေ့လည် (၂) နာရီအထိ အမှတ်(၅၂၀/D-1)၊ ရွှေဂုံတိုင်ရှိ Synergy Education ရုံးခန်းတွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး UWSB မှ Mr. Ricche Marcel က အသေးစိတ်ရှင်းလင်း ဆွေးနွေးပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း.....
ကျင်းပမည့်ရက် - 10.10.2010 (Sun)
10:00 am to 2:00 pm ကျင်းပမည့်နေရာ - အမှတ်(၅၂၀/D-1)၊ ရွှေဂုံတိုင်ရှိ Synergy Education ရုံးခန်း
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်များ နှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ် (UMFCCI)၊ ပြန်ကြားရေးနှင့် သတင်းနည်းပညာ မြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကော်မတီမှ ကျင်းပ.....
ကျင်းပမည့်ရက် - 2.10.2010 (Sat)
2:00 pm ကျင်းပမည့်နေရာ - UMFCCI အသင်းချုပ်ရုံး၊ မင်္ဂလာခန်းမ၊ အမှတ် (၂၉)၊ မင်းရဲကျော်စွာလမ်း၊ (စိန်ဂျွန်းမှတ်တိုင်)၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်။ ဖုန်း - ၂၁၄၃၄၄/၅/၆/၇/၈/၉
နိုင်ငံတကာ ပညာရေးဟောပြောပွဲအစီအစဉ်များကို MSI Office တွင်ဆက်တိုက်ပြုလုပ်ကျင်းပမည် ပြည်တွင်းပညာရေးဝန်ဆောင်မှု ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သော Myanmar Search International Services Co.,Ltd. (MSI) က နိုင်ငံတကာပညာရေးဟောပြော ဆွေးနွေးပွဲကို ကုမ္ပဏီ၏ ရုံးခန်း၌ အောက်တိုဘာလ(၁) ရက်နေ့မှ အောက်တိုဘာလ (၁၆) ရက်နေ့အတွင်း ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း.....
ကျင်းပမည့်ရက် - 1.10.2010 (Fri)
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဦးဆုံး Retail Management Workshop ကျင်းပပြုလုပ်မည်
OESC Training Center (Myanmar) နှင့် စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ AEC College Pte Ltd. တို့ပူးပေါင်းစီစဉ်သော Retail Management Workshop (လက်လီအရောင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ) ကို အောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက်၊ နံနက် ၈ နာရီမှ ညနေ ၄ နာရီအထိ အမှတ် (၂၉)၊ ဒုတိယထပ်ရှိ မင်းရဲကျော်စွာလမ်း၊ လမ်းမတော်ရှိ UMFCCI Seminar Hall တွင်ကျင်းပပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း.....
ကျင်းပမည့်ရက် - 24.10.2010 (Sat)
ကျင်းပမည့်နေရာ - အမှတ် (၂၉)၊ ဒုတိယထပ်ရှိ မင်းရဲကျော်စွာလမ်း၊ လမ်းမတော်ရှိ UMFCCI Seminar Hall
British Council Education Fair 2010 (၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် ဗြိတိသျှကောင်စီပညာရေးဆိုင်ရာပြပွဲ)ကျင်းပမည်
ဗြိတိသျှကောင်စီ မြန်မာမှကြီးမှုးကျင်းပသော ပညာရေးဆိုင်ရာပြပွဲတစ်ရပ်ကို အောက်တိုဘာလ ၉ ရက်နေ့ နံနက် ၁ဝ နာရီမှ ညနေ ၅ နာရီအထိ ရန်ကုန်မြို့ရှိ ကုန်သည်ကြီးများဟိုတယ်၏ခန်းမတွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း.....
ကျင်းပမည့်ရက် - 9.10.2010 (Sat)
ကျင်းပမည့်နေရာ - ကုန်သည်ကြီးများဟိုတယ်
မြန်မာနိုင်ငံငါးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံပုစွန်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းတို့ ပူးပေါင်းကျင်းပသည့် ဟောပြောပွဲများကို ၂ဝဝ၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ၊ (၇) ရက်နေ့မှစ၍ (၂) ပတ်လျှင် တစ်ကြိမ်ကျင်းပလျှက်ရှိ...
ကျင်းပမည့်ရက် - 25.9.2010 (Sat)
ကျင်းပမည့်နေရာ - မြန်မာနိုင်ငံငါးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်၊ ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီးနှင့် စက်မှုဆေးဝါးလမ်းထောင့်၊ အနောက်ကြို့ကုန်း၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။
လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာနှင့် ကွန်ပျူတာနက်ဝက်ဘ်အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပမည် စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်၊ ကွန်ပျူတာနက်ဝက်လ်အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်နှင့် စီးပွားရေးဘာသာရပ်များကို သွားရောက် သင်ကြားလိုသူများအတွက် ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲကို ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက် နံနက် ၁ဝ နာရီမှ ၁၂ နာရီ အထိ OESC တွင်ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း...
ကျင်းပမည့်ရက် - 18.9.2010 (Sat)
ကျင်းပမည့်နေရာ - OESC
အခြေခံပညာအထက်တန်း ( သို့ ) GCE O Level အောင်မြင်ပြီးသူတိုင်း သြစတြေးလျနိုင်ငံအသိအမှတ်ပြု တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်သင်တန်း Australian Foundation Courses & Pre- University English Courses ကိုမြန်မာနိုင်ငံရှိ YIUS ကျောင်းတွင် September, 2010 စ၍ တက်ရောက်နိုင်ပါပြီ...
ကျင်းပမည့်ရက် - 13th to 18th September 2010
ကျင်းပမည့်နေရာ - Room (4), Building (7), Myanmar Info-Tech, Hlaing University Campus, Hlaing Tsp, Yangon.
�နိုင်ငံတကာအဆင့် ပညာသင်ယူရေး အခြေခံလိုအပ်ချက်များ၊ ပညာသင်ယူစဉ်နှင့် သင်ယူပြီး အခွင့်အလမ်းများ�
နိုင်ငံရပ်ခြားပညာသင် သိကောင်းစရာဟောပြောပွဲ နဝရတ်ပညာရေး၏ Education for All အစီအစဉ်အရ နိုင်ငံရပ်ခြားပညာသင် သိကောင်းစရာဟောပြောပွဲကို ၁၈-၉-၂ဝ၁ဝ (စနေနေ့) ညနေ (၂းဝဝ - ၄းဝဝ) နာရီတွင် ရန်ကုန်မြို့ Traders Hotel (ကုန်းဘောင်-တကောင်း) ခန်းမတွင်ကျင်းပ...
ကျင်းပမည့်နေရာ - Traders Hotel Read More��
Malaysia နိုင်ငံ Sunway University ၏ ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပမည် ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်အသီးသီး၌ ဆေးနှင့်အခြားသောမေဂျာများသွားရောက်သင်ယူလိုသူများအတွက် Pre - University Programs များအား မလေးရှားနိုင်ငံ၏ World Class Education ဖြစ်သော Sunway University တွင်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့်တက်ရောက်သင်ယူနိုင်...
ကျင်းပမည့်ရက် - 14.9.2010 (Sat)
ကျင်းပမည့်နေရာ - MWEA Tower ပထမထပ်ရှိ Smart Resources Education Centre
ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာပညာရှင်များဟောပြောပွဲ မြန်မာနိုင်ငံငါးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံပုစွန်လုပ်ငန်းရှင်းများအသင်းတို့ ပူးပေါင်းကျင်းပသည့် ဟောပြောပွဲများကို ၂ဝဝ၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ၊ (၇) ရက်နေ့မှစ၍ (၂) ပတ်လျှင် တစ်ကြိမ်ကျင်းပလျှက်ရှိပါသည်။ ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်တွင်လည်း (၂) ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ် ဆက်လက်ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါသည်။...
ကျင်းပမည့်ရက် - 11.9.2010 (Sat)
2:00 pm ကျင်းပမည့်နေရာ - မြန်မာနိုင်ငံငါးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်၊ ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီးနှင့် စက်မှုဆေးဝါးလမ်းထောင့်၊ အနောက်ကြို့ကုန်း၊ အင်းစိတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။
Auston Seminar September 19 တွင်ပြုလုပ်မည် UK နိုင်ငံရှိ Coventry University မှ ချီးမြင့်သည့် Undergraduate နှင့် Postgraduate, Master Program ကိုစင်္ကာပူနိုင်ငံရှိ Coventry တွင် တက်ရောက်သင်ယူနိုင်ပါသည်။ အထက်တန်းအောင် မြန်မာ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများ အနေဖြင့် (၂) နှစ် (၆) လ တက်ရုံဖြင့် UK မှ ပေးသည့် Engineering, IT, Computing, Business အစရှိသည့် ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ဘွဲ့များကို ရယူနိုင်သည့်အတွက်ငွေကုန်ကြေးကျခွဲသွင်းနိုင်...
ကျင်းပမည့်ရက် - 19.9.2010 (Sun)
10:00 am ကျင်းပမည့်နေရာ - STUDY ABROAD ရုံးခန်း
ကျင့်ဝတ် နှင့် နည်းပညာ� ဟောပြောပွဲ နှင့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပမည် yle="margin-left: 20px; margin-right: 10px">
သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာ ပညာရှင်အသင်းမှကြီးမှူး၍ MYANMAR BLOGGER SOCIETY (MBS) အဖွဲ့မှ ပံ့ပိုးကူညီမှုဖြင့် ရန်ကုန်မြို့၊ လှိုင်မြို့နယ် မြန်မာအင်ဖိုတက်ခ်အဆောက်အဦး၌ စက်တင်ဘာလ ၁၃ ရက် နှင့် ၁၄ ရက်နေ့များတွင် �ကျင့်ဝတ် နှင့် နည်းပညာ� ခေါင်းစဉ်ဖြင့် နည်းပညာနှီးနှောဖလှယ်ပွဲနှင့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ကျင်းပမည်...
ကျင်းပမည့်ရက် - 13.9.2010 (Mon)
ကျင်းပမည့်နေရာ - ရန်ကုန်မြို့၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ မြန်မာအင်ဖိုတက်ခ်၊ CONFERENCE HALL
MCPA JENESYS FreeTalk ကျင်းပမည်
�၂၁ ရာစု အရှေ့အာရှ လူငယ်ကျောင်းသား ချစ်ကြည်မှု ဖလှယ်ရေးအစီအစဉ်ကြီး (JENESYS Programme)� ကို ဂျပန် အစိုးရ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်သံရုံး၊ ဂျပန်အင်တာနေရှင်နယ် ကိုအော်ပရေးရှင်းစင်တာ(JICE) နှင့် မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာ အသင်းချုပ် တို့ ပူးပေါင်းကာ မြန်မာနိုင်ငံတဝှမ်းရှိ မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာပညာရှင် အသင်းဝင်လူငယ်အိုင်တီပညာရှင် ၂၆ ဦးကို ရွေးချယ်ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ကာလတိုလေ့လာရေးခရီး သွားရောက်...
ကျင်းပမည့်နေရာ - ရန်ကုန်မြို့၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ မြန်မာအင်ဖိုတက်ခ်၊ ပင်မဆောင်
အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်များအကြောင်း OSM တွင်ဆွေးနွေးပေးမည် အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်အား နိုင်ငံခြားတွင် ရွေးချယ်တက်ရောက် ပညာသင်ကြားမည်ဆိုပါက အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းကြောင့်ရွေးချယ်ခြင်းထက် အမှန်တကယ် ဝါသနာပါမှသာ ရွေးချယ်တက်ရောက်သင့်ကြောင်း OSM ပညာရေး အတိုင်ပင်ခံစင်တာမှ ပြောကြား...
ကျင်းပမည့်ရက် - 9, 10, 11 Sept 2010
ကျင်းပမည့်နေရာ - OSM ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုစင်တာ
�ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာပညာရှင်များ၏ ဟောပြောပွဲဖိတ်ကြားခြင်း� ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ် (UMFCCI)၊ ပြန်ကြားရေးနှင့် သတင်းနည်းပညာမြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကော်မတီမှ ကျင်းပသည့် ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ပညာရှင်များဟောပြောပွဲများကို ၂ဝဝ၇ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၅) ရက်နေ့မှစတင်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ ဟောပြောပွဲများကို တစ်လတစ်ကြိမ် ပထမပတ်၊ စနေနေ့တွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါသည်။...
ကျင်းပမည့်ရက် - 4.9.2010 (Sat)
ကျင်းပမည့်နေရာ - UMFCCI အသင်းချုပ်ရုံး၊ မင်္ဂလာခန်းမ
စင်ကာပူနှင့်ထိုင်းနိုင်ငံများရှိအစိုးရကျောင်းများ ဝင်ခွင့်အတွက် ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပမည် မြန်မာနိုင်ငံမှတက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်ပြီးသူများနှင့် ဘွဲ့ရပြီးသူများအတွက် စင်ကာပူနှင့်ထိုင်းနိုင်ငံများရှိ အစိုးရကျောင်းများသို့ ပညာသင်ဆု လျှောက်ထားတက်ရောက်နိုင်ရန်အတွက် ဝင်ခွင့်လိုအပ်ချက်များနှင့် ပြင်ဆင်ထားရမည်များကို OESC (Overseas Education Service Center)၌ သြဂုတ်လ ၂၈ရက်နေ့ မနက် ၁ဝ နာရီမှ နေ့လည် (၂)နာရီအထိပြုလုပ်ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း...
ကျင်းပမည့်ရက် - 28.8.2010 (Sat)
10:00 AM to 2:00 PM ကျင်းပမည့်နေရာ - OESC (Overseas Education Service Center)
Curtin Sarawak Seminar ကျင်းပမည့်ရက် - 29.8.2010 (Sun)
10:00 AM to 1:00 PM ကျင်းပမည့်နေရာ - Park Royal Hotel (Meeting Room2& 3)
ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာပညာရှင်များဟောပြောပွဲ မြန်မာနိုင်ငံငါးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံပုစွန်လုပ်ငန်းရှင်းများအသင်းတို့ ပူးပေါင်းကျင်းပသည့် ဟောပြောပွဲများကို ၂ဝဝ၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ၊ (၇) ရက်နေ့မှစ၍ (၂) ပတ်လျှင် တစ်ကြိမ်ကျင်းပလျှက်ရှိ...
2:00 pm ကျင်းပမည့်နေရာ - မြန်မာနိုင်ငံငါးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်၊ ဘုရင်နောင်လမ်းမကြီးနှင့် စက်မှုဆေးဝါးလမ်းထောင့်၊ အနောက်ကြို့ကုန်း၊ အင်းစိတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။
Singapore နိုင်ငံရှိ Edu-Trust (4)year သက်တမ်းအဆင့်ဝင် PSB Academy ၏ Study Grant နှင့်ပတ်သက်သော ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲကို MSI တွင်ပြုလုပ်ရန်ရှိ
Singapore နိုင်ငံရှိ Edu-Trust သက်တမ်း (၄) နှစ် ရရှိထားသော PSB Academy တွင် �Diploma in Engineering� ဘာသာရပ်နှစ်ခု၏ ကျောင်းဖွင့်ချိန် ကာလကိုယခင် September လမှ ယခု October လအထိတိုးချဲ့ပြီး၊ Study Grant အစီအစဉ်များနှင့်ပတ်သက်သော ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲ ...
ကျင်းပမည့်ရက် - 25.8.2010 (Wed)
10:00 am to 1:00 pm ကျင်းပမည့်နေရာ - MSI (ရန်ကုန်) Read More��
Strand Hotel ၌ ပြုလုပ်မည့် Vocational Education Fair 2010 တွင် Gallant မှ အထူးအစီအစဉ်များဖြင့်ပြသမည် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဘာသာရပ် (၂ဝဝ) ကျော်အား City & Guilds အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၏ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများအတိုင်း သင်ကြားပေးပြီး ပြည်တွင်း၌သာ တက်ရောက်နိုင်...
9:00 am to 5:00 pm ကျင်းပမည့်နေရာ - Strand Hotel Read More��
City and Guilds Vocational Education Fair 2010 ကျင်းပမည်
မြန်မာလူငယ်များအား ဆယ်တန်းဖြေဆိုအောင်မြင်ပြီးချိန်မှပင်စတင်၍ နောင်အနာဂတ်အောင်မြင်မှုအတွက် စနစ်တကျပြင်ဆင်တကတ်လာစေရန်၊ �Globalization� ခေတ်အတွင်းအများနှင့် ရင်ဘောင်တန်း၍ ယှဉ်ပြိုင်လုပ်ကိုင်နိုင်စေရန်...
1:30 ကျင်းပမည့်နေရာ - Strand Hotel Ball Room (Seikkanthar Street, Kanna Block)
စင်္ကာပူကျောင်းဝင်ခွင့်ဆွေးနွေးပွဲ Study Abroad မှပြုလုပ်မည် REGENT EDUCATION GROUP လက်အောက်မှ SINGAPORE EDUCATION SPECIALIST ဖြစ်သော STUDY ABROAD Information Centre မှကြီးမှူးစီစဉ်၍ Singapore နိုင်ငံရှိ အကောင်းဆုံး Private ကျောင်းများထဲတွင် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သော PSB Academy နှင့် MDIS ကျောင်းတို့၏ Application Wave အစီအစဉ်များ Merit Scholarship အစီအစဉ်များနှင့် ကျောင်းဝင်ခွင့်ဆိုင်ရာ...
ကျင်းပမည့်ရက် - 27.8.2010 (Sun)
ကျင်းပမည့်နေရာ - တောင်ကြီးမြို့
ပညာရွှေအိုး မှ ပညာရေးပြပွဲ
New Zealand နိုင်ငံ Computer Power Institute တွင်တစ်နှစ် IT Diploma ကိုတက်ရောက်သင်ကြားရုံဖြင့် Diploma ရရှိပြီးပါက Graduate job search visa (၁) နှစ်နှင့် Open work permit (၂) နှစ်ရရှိနိုင်မည့် အခွင့်အရေးရှိ...
10:00 � 12:00 am
ကျင်းပမည့်နေရာ - Park Royal Hotel , Grand Ball Room (3)
STUDY @ CURTIN UNIVERSITY IN AUSTRALIA သြစတြေးလျနိုင်ငံ၏ တရားဝင် အသိအမှတ်ပြု သြစတြေးလျတက်္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် Australian Foundation Course ကိုသင်ကြားပေးလျှက်ရှိသော YIUS ( Yangon Institute for University Studies ) နှင့် Curtin University, Australia တို့ပူးပေါင်းစီစဉ်သည့် ပညာရေးဟောပြောပွဲကို လာမည့် August, 28 ရက်နေ့ ၁၀နာရီတွင် Traders Hotel ၌ကျင်းပသွားမည်ဟုသိရှိရ...
ကျင်းပမည့်နေရာ - Traders Hotel, Konbaung Tagaung Hall, Rm 223, Bogyoke Aung San Rd, Yangon.
James Cook University (Singapore) ၏ ပညာရေးဟောပြောပွဲ James Cook University (Singapore) ၏ ပညာရေးဟောပြောပွဲကို မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သော KMD Computer Centre မှ အောက်ပါ အစီအစဉ်အတိုင်း ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။...
ကျင်းပမည့်ရက် - 5.9.2010(Sun)
ကျင်းပမည့်နေရာ - KMD Computer Centre (Myaynigone)
James Cook University မှ မြန်မာနိုင်ငံမှကျောင်းသူကျောင်းသားများအတွက် ပထမဆုံးအကြိမ် MBA စကောလားရှစ် စာမေးပွဲအကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြား မြန်မာနိုင်ငံမှ MBA တက်ရောက်ရန်စိတ်ဝင်စားသော ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက်၊ ၀င်ခွင့်လျှောက်ထားခြင်း နှင့် JCU ရဲ့ ပထမဆုံးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စင်္ကောလားရှစ် အကြောင်းရှင်းလင်းပွဲကို 2010 စက်တင်ဘာ (၄) ရက်နေ့ နံနက် (၁၀) နာရီကနေပြီး (၁၂) နာရီအထိ ရန်ကုန်မြို့ ၊ Park Royal Hotel မှာကျင်းပ ပြုလုပ်မယ်လို့CROWN Education မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦကပြောကြား...
Management Development Institute of Singapore (MDIS) ၏ပညာရေးဟောပြောပွဲ Management Development Institute of Singapore (MDIS)ပညာရေးဟောပြောပွဲကို မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သော KMD Computer Centre မှ အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း ကျင်းပပြုလုပ်မည်...
ကျင်းပမည့်ရက် - 27.8.2010 (Fri)
ကျင်းပမည့်နေရာ - Park Royal Hotel (Grand Ballroom 3)
Wise International School for Executives Marketing for Youth Entrepreneur...
ကျင်းပမည့်ရက် - 15.8.2010 (Sat)
ကျင်းပမည့်နေရာ - WISE International School for Executives
Rm.1009, 10th floor, Yuzana Tower,
ShweGonDine Junction, Bahan
၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက်တွင် မေးခွန်းပုံစံသစ်ဖြင့်ကျင်းပမည့် ဂျပန်စာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ (NewJLPT) နှင့် ပတ်သက်သောအသေးစိတ် အကြောင်းအရာများကို Japan Foundation နှင့် JEES မှထုတ်ပြန်သောအချက်အလက်များအားအခြေခံ၍ သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်၊ နံနက် ၁ဝ နာရီမှ နေ့လယ် ၁၂ နာရီအထိ JETC ဂျပန်စာသင်တန်းကျောင်းတွင် ရှင်းလင်းပြောကြားသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း...
ကျင်းပမည့်နေရာ - JETC ဂျပန်စာသင်တန်းကျောင်း
ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ပညာရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲ Megumi Education Centre နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံရှိ ကျောင်းကြီး ၅ ကျောင်းရဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးမှုဖြင့် ဂျပန်ပညာရေးဟောပြောဆွေးနွေးပွဲကို အောက်ပါအတိုင်းကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။ ...
ကျင်းပမည့်ရက် - 7.8.2010 (Sat)
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း �Information Security� ဟောပြောပွဲကျင်းပမည် သတင်းအချက်အလက် နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှ ကြီးမှူး၍ မျက်မှောက်ခေတ် ICT/ Internet နည်းပညာရပ်များ၏ နောက်ကွယ်ရှိ သတင်းအချက်အလက်ပိုင်းဆိုင်ရာ လုံခြုံရေးစနစ်များ ...
ကျင်းပမည့်နေရာ - မြန်မာအင်ဖိုတက်ခ်၊ ပင်မဆောင်ရှိ အခန်း(၂၀၅)
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းများ အဆောက်အဦး နဝရတ်ကိုးပါး ရတနာအုတ်မြစ်စီ မင်္ဂလာအခမ်းအနားနှင့် မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းများ၏ နှစ်ပတ်လည် အခမ်းအနား
ကျင်းပမည့်ရက် - 1.8.2010 (Sun)
8:30 am ကျင်းပမည့်နေရာ - မြန်မာ့သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာကော်ပိုရေးရှင်းအဆောက်အအုံ
လှိုင်တက္ကသိုလ်နယ်မြေ၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။
ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာပညာရှင်များ ဟောပြောပွဲ မြန်မာနိုင်ငံငါးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံပုစွန်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းတို့ ပူးပေါင်းကျင်းပသည့် ဟောပြောပွဲများကို ၂ဝဝ၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ၊ ၇ ရက်နေ့မှစ၍ (၂) ပတ်လျှင် တစ်ကြိမ်ကျင်းပလျှက်ရှိ ...
ကျင်းပမည့်ရက် - 31.7.2010 (Sat)
2:00 noon ကျင်းပမည့်နေရာ - မြန်မာနိုင်ငံငါးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်၊
Prof. U Maw Than မှ Role of Accountants & Professional Ethics
ခေါင်းစဉ်ဖြင့်ဟောပြောပွဲတစ်ရပ်ကို သြဂုတ်လ ၁ရက်နေ့ မနက် ၁ဝနာရီ LCCI Accounting Quiz အပြီး၌ Myanmar Info-Tech ...
10:00am ကျင်းပမည့်နေရာ - Myanmar Info-Tech
မြန်မာကျောင်းသားများအတွက် နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်များတွင် ရွေးချယ်သင့်သောဘာသာရပ်များ အကြောင်းနှင့် MDIS မှပေးအပ်မည့် Merit Scholarship အကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြား
နိုင်ငံတကာတွင်ပညာသင်ယူမည့် မြန်မာကျောင်းသူကျောင်းများအတွက် တက္ကသိုလ်များတွင် ရွေးချယ်သင့်သောဘာသာရပ်များ၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းအတွက် အားသာချက်ရှိသောဘာသာရပ်များ၊ မိမိနဲ့ကိုက်ညီမှု့ရှိသော ဘာသာရပ်များကိုရွေးချယ်နည်းစသည့် အကြောင်းအရာများ...
ပဉ္စမအကြိမ်မြောက် Y.E.D.C ၏ Online လူငယ်တွေ့ဆုံပွဲကျင်းပမည်
ပဉ္စမအကြိမ်မြောက် Y.E.D.C (Youth Education & Development Centre) ၏ Online လူငယ်တွေ့ဆုံပွဲ....
ကျင်းပမည့်ရက် - 25.7.2010 (San)
1:00am to 5:00 pm
ကျင်းပမည့်နေရာ - Asia Plaza Hotel Read More��
BioMedical Science ဒီဂရီအတွက်အသစ်သင်ယူရရှိနိုင်သည့် Cancer Biology ဘာသာရပ်နှင့် နှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းသစ်များအကြောင်း CROWN Education မှ ရှင်းလင်းပြောကြား နိုင်ငံတကာပညာရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ဘာသာရပ်ရွေးချယ်ခြင်း၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းရွေးချယ်ခြင်းများ အတွက်စဉ်း စားရာတွင်၊ ဆေးပညာကို စိတ်ဝင်စားပြီး၊ နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု ဒီဂရီရရှိလိုသူများအတွက် ....
ကျင်းပမည့်ရက် - 23.7.2010 (Fri)
ကျင်းပမည့်နေရာ - Summit Park View Hotel
စင်ကာပူနိုင်ငံအခြေစိုက် AEC College နှင့်ပြည်တွင်းပညာရေးအတိုင်ပင်ခံလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သော OESC တို့ပူးပေါင်း၍ ၂ဝ၁ဝ စင်ကာပူပညာရေး အပြောင်းအလဲများအကြောင်း ....
ကျင်းပမည့်ရက် - 18.7.2010 (Sun)
ကျင်းပမည့်နေရာ - Parkroyal Hotel
သြစတြေးလျတွင် တက္ကသိုလ်တက်လိုသူများအတွက် JCU (စင်ကာပူ) မှတဆင့် တက်ရောက်နိုင်သော ဘွဲ့/ မဟာသိပ္ပံဘွဲ့များအကြောင်းဆွေးနွေးပွဲ
James Cook University, Australia (S�pore Campus) မှဆွေးနွေး ....
ကျင်းပမည့်နေရာ - Tip Top (Yangon)
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်ပြီးသူများအတွက် Auston Institute မှ Special Promotion Package Program (SP3) အကြောင်းဆွေးနွေးပွဲ
Auston Institute of Management & Technology မှ Country Manger ဆွေးနွေး ....
ကျင်းပမည့်ရက် - 17.7.2010 (Sat)
သြစတြေးလျားတက္ကသိုလ်ကိုတက်ရောက်လိုတဲ့ ဆယ်တန်းအောင်ပြီးသူ ဖောင်ဒေးရှင်းကတက်နိုင်ဖို့ သြစတြေးလျားတက္ကသိုလ်ကို တက်ရောက်လိုတဲ့ ဆယ်တန်းအောင်ပြီးသူတွေက စင်ကာပူနိုင်ငံ ဂျေစီယူကျောင်းမှာ foundation program ကိုတက်ရောက်နိုင် ....
ကျင်းပမည့်ရက် - 16.7.2010 (Fri)
ကျင်းပမည့်နေရာ - Tip Top Education (Mandalay)
International School များတွင် ဆရာ/ဆရာမ လုပ်လိုသူများအတွက် NIM မှ Dip in ECCE (English/ Chinese) အကြောင်းဆွေးနွေးပွဲ Nanang Institute of Management မှ Country Manager ဆွေးနွေး ....
ကျင်းပမည့်ရက် - 14.7.2010 (Wed)
ကျင်းပမည့်နေရာ - Tip Top စုဝေးခန်းမ Read More��
�ပညာမတတ်သော ပညာရှိ� ခေါင်းစဉ်ဖြင့် မန္တလေး၌ ဟောပြောပွဲ ကျင်းပမည်
လုပ်ငန်းရှင်များ၊ စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းများ၊ ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက် ရည်ရွယ်ကျင်းပသော အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို Tip Top:Capacity Development Institute of Myanmar မှ ဦးစီး၍ ....
ကျင်းပမည့်ရက် - 11.7.2010 (Sun)
ကျင်းပမည့်နေရာ - ဈေးချိုဟိုတယ် (Mandalay)
အကြောင်းအရာ ။ Myanmar Strategic Position in the Asia Region ....
ကျင်းပမည့်ရက် - ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်နေ့ (စနေနေ့)
နေ့လည် ၂း၀၀ နာရီ
ကျင်းပမည့်နေရာ - UMFCCI ၊ မင်းရဲကျော်စွာလမ်း၊ စွမ်းအင်ဝန်ကြီးရုံးအနီး။
အင်ဂျင်နီယာ၊ ကွန်ပျူတာနှင့် စီးပွားရေးဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပမည်
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်ပြီး စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် အင်ဂျင်နီယာ၊ ကွန်ပျူတာနှင့် စီးပွားရေးဘာသာရပ်များဖြင့် ပညာဆက်လက် ဆည်းပူးလိုသူ ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက် ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲ တစ်ခုကို ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ဝ ရက်နေ့ နံနက် ၁ဝ နာရီမှ နေ့လယ် ၁၂ နာရီအထိ OESC Seminar Room တွင်ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရ ....
ကျင်းပမည့်ရက် - 10.7.2010 (Tue)
ကျင်းပမည့်နေရာ - OESC Seminar Room
စင်္ကာပူအမျိုးသားတက္ကသိုလ် National University of Singapore (NUS) တွင် 2011 January Intake အတွက် School of Design and Environment လက်အောက်ရှိ Master Program နှစ်ခုကို စတင်လျှောက်ထားနိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့ သိရ ....
ကျင်းပမည့်ရက် - 9.7.2010 (Fri)
လုပ်ငန်းခွင်ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ အခမဲ့ ဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်မည်
လုပ်ငန်းခွင်ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ဘာသာရပ်တစ်ခုချင်းစီအလိုက်အခမဲ့ ဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ....
ကျင်းပမည့်ရက် - 3.7.2010/4.7.2010 (Sat,Sun)
ကျင်းပမည့်နေရာ - career pass job training
ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ပညာရေးဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲ
ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ပညာသင်ကြားခြင်းနှင့် ပညာသင်ဆုဆိုင်ရာပညာရေးဆွေးနွေးပွဲတစ်ရပ်ကို ဇူလိုင်လ ၅ ရက် (တနင်္လာနေ့) နံနက် ၉းဝဝ နာရီမှ ၁၁းဝဝ နာရီ အထိ Summit Park View Hotel တွင်ကျင်းပ ....
ကျင်းပမည့်ရက် - 5.7.2010 (Mon)
BCA ACADEMY မိတ်ဆက်ပွဲ
ကျင်းပမည့်ရက် - 27.6.2010 (Sun)
ကျင်းပမည့်နေရာ - Tip Top: IESP
အမှတ်(170/176)၊ အခန်း (7010)၊ MGW Tower ၊ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း။
Retail Planning & Management Seminar
အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် ပညာသင်ကြားလိုသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအတွက် ပညာသင်အခွင့်အလမ်းများကို အမေရိကန်နိုင်ငံမှ Taylors University College ကဇွန်လ ၂၆ ရက်နေ့တွင် ....
ကျင်းပမည့်နေရာ - WISE International School for Executives Room No.1009, 10th Floor, Yuzana Tower, Corner of ShweGonDine Rd & Kabaraye Pagoda Rd, Bahan
စင်ကာပူ Informatics Academy ထပ်မံဖွင့်မည့် သင်တန်းများအကြောင်း ဆွေးနွေးမည်
စင်ကာပူနိုင်ငံ Informatics Academy က ထပ်မံဖွင့်လှစ်သင်ကြားမည့်သင်တန်းများအကြောင်း ဆွေးနွေးပွဲကို ဇွန်လ ၂၆ ရက်နေ့တွင် မန္တလေးစွမ်းဟိုတယ်တွင်လည်းကောင်း၊ ဇွန်လ ၂၉ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့ Tip Top စုဝေးခန်းမ၌ လည်းကောင်းကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ....
ကျင်းပမည့်ရက် - 26.6.2010 (Sat) , 29.6.2010 (Tue)
ကျင်းပမည့်နေရာ - Swam Hotel (Mandalay) , Tip Top စုဝေးခန်းမ (Yangon) Read More��
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ပညာသင်ယူနိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းများ ဟောပြောမည်
ကျင်းပမည့်ရက် - 26.6.2010 (Sat)
ကျင်းပမည့်နေရာ - ရွှေဘုံသာလမ်း၊ အမှတ် ၂၃၄၊ ဒုတိယထပ် Read More��
Education For All သိကောင်းစရာဟောပြောပွဲ
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင် ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများအတွက် အင်္ဂလန်နိုင်ငံ World Wide Education Management ၏ Director ဖြစ်သူ ဒေါက်တာနေ PhD UK မှ �ဘဝရည်မှန်းချက်နှင့် ဘာသာရပ်ရွေးချယ်မှုဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ� ခေါင်းစဉ်ဖြင့် အသေးစိတ်ရှင်းလင်းဟောပြောသွားမည်....
ကျင်းပမည့်နေရာ - Traders Hotel (ကုန်းဘောင်တကောင်းခန်းမ) Read More��
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းဖြေဆိုအောင်မြင်ပြီးသူများအတွက် နိုင်ငံတကာပညာရေးစနစ်အကြောင်းနှင့် တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ပြင်ဆင်ခြင်းအကြောင်းကို ဇွန်လ ၂၆ ရက်နှင့် ၂၇ ရက်နေ့တို့တွင် ဆွေးနွေးမည်ဖြစ်ကြောင်း....
ကျင်းပမည့်ရက် - 26.6.2010 , 27.6.2010
ကျင်းပမည့်နေရာ - Crown Education
Studying in America ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဆင့်ကူးပညာရေး ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကို ဇွန်လ ၂၆ ရက်နေ့ နေ့လယ် ၁၁ နာရီမှ ၁ နာရီအထိ ရန်ကုန်မြို့ MSI ရုံးခန်းတွင် ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း....
ကျင်းပမည့်ရက် - 26.6.2010 (Sat) ကျင်းပမည့်အချိန် -
စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိ Private Institute များထဲမှ အကြီးမားဆုံး အခိုင်မာဆုံး သင့်ဘဝအတွက် အာမခံချက်အပေးနိုင်ဆုံး Informatics Institute of Singapore နှင့် ကျောင်းသားများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဝန်ဆောင်ခ လုံးဝမယူဘဲ....
ကျင်းပမည့်ရက် - 24.6.2010 (Thur) ကျင်းပမည့်အချိန် -
ကျင်းပမည့်နေရာ - Bagan Room @ Traders Hotel
အမေရိကနှင့် ဗြိတိန်တက္ကသိုလ်များ တက်ရောက်ခွင့်ပညာပေးရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်မည်
Regent ပညာရေးကုမ္ပဏီ၏ စီစဉ်မှုဖြင့် အမေရိကနှင့် ဗြိတိန်နိုင်ငံတို့ရှိ တက္ကသိုလ်များ တက်ရောက်ခွင့်ဆိုင်ရာ ပညာပေးရှင်လင်းပွဲကို ဇွန်လ ၁၉ ရက်နေ့ ညနေ ၅ နာရီတွင် ရန်ကုန်မြို့ Traders Hotel Level-3တွင် ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း....
ကျင်းပမည့်ရက် - 19.6.2010
Education Malaysia Exposition Myanmar, 2010 တစ်ဦးချင်းသိလိုသမျှ ဆွေးနွေးမေးမြန်းခွင့်၊ Interview ဖြေဆိုခွင့်....
ကျင်းပမည့်ရက် - 19th and 20th June, 2010
ကျင်းပမည့်နေရာ - Park Royal Hotel Ballroom Yangon.
STI မှ ကြီးမှူး၍ သြစတြေးလျပညာရေးနှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲ STI Education သည်မြန်မာကျောင်းသားများနှင့် သြစတြေးလျပညာရေးကို ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှစတင် မိတ်ဆက်၍သြစတြေးလျတွင် ပညာသင်ကြားလိုသူများ အတွက် လိုအပ်သောဝန်ဆောင်မှုများပေးဆောင်လျှက်ရှိရာ....
ကျင်းပမည့်ရက် - 20.6.2010 (Sun)
International Programme နှင့် ပတ်သက်၍ Information Talk ပြုလုပ်မည်
စင်ကာပူနိုင်ငံအပါအဝင် နိုင်ငံတကာသို့ သွားရောက်ပညာသင်ယူလိုသူများအတွက် ပြည်တွင်း၌ သင်ယူနိုင်မည့် International Programme များနှင့် ပတ်သက်၍ Information Talk တစ်ခုကိုဇွန်လ ၉ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း....
ကျင်းပမည့်ရက် - 9.6.2010 (Web)
Fundamental of Sales & Distribution ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဟောပြောပွဲကို Wise International School for Executives မှ ကြီးမှူးကျင်းပမည်
နိုင်ငံတကာပညာရေးကွန်ယက်ကောလိပ်တစ်ခုဖြစ်သည့် Navitas Network of International College ၏ နိုင်ငံတကာပညာရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် အကြောင်းအရာများ ဟောပြောပွဲအား ဇွန် ၅ ရက်တွင် ကုန်သည်ကြီးများဟိုတယ်၌ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်....
ကျင်းပမည့်ရက် - 6.6.2010 (Sun)
ကျင်းပမည့်နေရာ - Wise International School for Executives သင်တန်းခန်းမ
ကျင်းပမည့်ရက် - 5.6.2010 (Sat)
လူငယ်များအတွက် အနာဂတ် ပညာရေးနှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများအကြောင်း ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲနှင့် Free Workshop ကျင်းပပြုလုပ်မည်
မြန်မာနိုင်ငံမှ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်ပြီးသူများ၊ လူငယ်များ၊ ကျောင်းသားမိဘများနှင့် ဘွဲ့ရလူငယ်များအတွက် ရည်ရွယ်လူငယ်များအတွက် အနာဂတ်ပညာရေးနှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ အကြောင်း....
ကျင်းပမည့်နေရာ - Parkroyal Hotel Read More
What is NEXT after BEHS ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်မည်
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲ အောင်မြင်ပြီးသူများနှင့် အောင်စာရင်းစောင့်ဆိုင်းလျက်ရှိသော ကျောင်းသူကျောင်းသားများအတွက် ရည်ရွယ်၍ What is NEXT after BEHS ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကို ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း....
ကျင်းပမည့်ရက် - 2.6.2010 (Wed)
Cambridge Tutors College London (CTC) Free Seminar ဗြိတိန်ရှိဆေးတက္ကသိုလ်များနှင့်အကျော်ကြားဆုံးတက္ကသိုလ်များသို့တက်ရောက်လိုသောမြန်မာကျောင်းသူကျောင်းသားများအတွက် အထူးသတင်းကောင်း....
ကျင်းပမည့်ရက် - 1.6.2010 (Tue)
ကျင်းပမည့်နေရာ - Traders Hotel, Level (3)
Microsoft မှ နောက်ဆုံးထုတ် Programming နည်းပညာအကြောင်း ဟောပြောပွဲကျင်းပမည် သတင်းအချက်အလက် နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း (MCPA) မှ ကြီးမှူး၍ ၂ဝ၁ဝ ပြည့်နှစ် မေလ (၃ဝ)ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့ နံနက်(၉း၃ဝ) မှ နေ့လည်(၁၂းဝဝ)နာရီအထိ....
ကျင်းပမည့်ရက် - 30.5.2010 (Sun)
ကျင်းပမည့်နေရာ - Room (205), Myanmar Info Tech
Association of Business Executive (UK) ဟောပြောပွဲပြုလုပ်မည် Association of Business Executive (UK) မှ စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်၊ ဈေးကွက်စီမံခန့်ခွဲမှု ဆိုင်ရာဘာသာရပ်၊ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာဘာသာရပ်နှင့် ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဆိုင်ရာဘာသာရပ်များကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် မည်သို့ သင်ယူနိုင်မည့်အကြောင်းကို....
ကျင်းပမည့်ရက် - 29.5.2010 (Sat)
ကျင်းပမည့်နေရာ - Swam Hotel (Mandalay)
မလေးရှားနိုင်ငံရှိ INTI University College ဝင်ခွင့်တစ်ဦးချင်းဆွေးနွေးမည်
မလေးရှားပညာရေးဆွေးနွေးပွဲ ရက်သတ္တပတ်အဖြစ် OSM ပညာရေးစင်တာမှ မေလ ၂၇၊ ၂၈ နှင့် ၂၉ ရက်နေ့များတွင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်း ၂ဝဝ ကျော်မှ ထပ်တန်းတက္ကသိုလ်ပေါင်း ၃ဝဝ ကျော်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားသော....
ကျင်းပမည့်ရက် - 27,28,29.5.2010 ကျင်းပမည့်နေရာ - O.S.M Education Centre
စင်ကာပူတွင် ဇူလိုင်ကျောင်းဖွင့်အမီ ပညာသင်ယူလိုသူများအတွက် ပညာရေးဆွေးနွေးမည်
စင်ကာပူနိုင်ငံ Auston Institute of Management and Technology တွင် အင်ဂျင်နီယာ၊ ကွန်ပျူတာနှင့် စီးပွားရေးဘာသာရပ်များကို ဇူလိုင် ကျောင်းဖွင့်အမီတက်ရောက်လိုသူ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအတွက်....
ကျင်းပမည့်ရက် - 27.5.2010 (Thur)
9:00 to 11:00 am ကျင်းပမည့်နေရာ - OESC ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုစင်တာ
� လူငယ်နှင့်စွန့်ဦးတီထွင်မှု � ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဟောပြောပွဲကို မေလ ၂၇ ရက်နေ့ နံနက် ၉ နာရီမှ ၁၁ နာရီအထိ မြေနီကုန်းပလာဇာရှိ PS Business School တွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်....
9:00 to 11:00 am ကျင်းပမည့်နေရာ - PS Business School Read More
အင်ဂျင်နီယာ၊ ကွန်ပျူတာနှင့်စီးပွားရေးဘာသာရပ်များဆိုင်ရာ ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပမည်
အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်၊ ကွန်ပျူတာဘာသာရပ်နှင့် စီးပွားရေးဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲကို မေလ ၂၇ ရက်၊ နံနက် ၉ နာရီမှ ၁၁ နာရီအထိ OESC Seminar Room တွင်ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရ....
9:00 to 11:00 am ကျင်းပမည့်နေရာ - OESC Seminar Room
စင်ကာပူနိုင်ငံ ပိုလီတက္ကနစ်ကျောင်းများအကြောင်း ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပမည်
အခြေခံပညာအထက်တန်း (တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း) စာမေးပွဲဖြေဆိုထားသူ ကျောင်းသူကျောင်းသားများအတွက် စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ ပိုလီတက္ကနစ် ကျောင်းများ နှင့် ပတ်သက်၍ ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲတစ်ရပ်ကို ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရ....
ကျင်းပမည့်ရက် - 26.5.2010 (Wed)
Myanmar Search International တွင် ပညာရေးဟောပြောပွဲများကျင်းပမည်
MSI Office တွင် မလေးရှားနှင့် စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိ ကမ္ဘာ့အသိအမှတ်ပြု ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်များသို့ ချိတ်ဆက် ထားသော Program များအကြောင်းကို မေလ ၂၅ ရက် နှင့် ၂၉ ရက်နေ့များတွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်....
ကျင်းပမည့်ရက် - 24.5.2010 (Mon) , 25.5.2010 (Tue)
Economic Growth, Intellectual Property and Information Technology: the Case of India ဟောပြောပွဲ
မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာလုပ်ငန်းရှင်အသင်းမှကြီးမှူးကျင်းပမည့် � Economic Growth, Intellectual Property and Information Technology: the Case of India � ခေါင်းစဉ်အမည်ဖြင့် ဟောပြောပွဲကို အောက်ဖော်ပြပါ အစီအစဉ်အတိုင်း ကျင်းပပြုလုပ်မည် ဖြစ်....
ကျင်းပမည့်ရက် - 25.5.2010 (Tue)
ကျင်းပမည့်နေရာ - MCIA Room (205), Main Building Myanmar Info-Tech, (Hlaing Campus)
We cordially invite you to honour our Ninth Anniversary to celebrate the Closing Ceremony of the Summer Special Courses for Kids by participating the following order.....
ကျင်းပမည့်ရက် - 24.5.2010 (Mon)
ကျင်းပမည့်နေရာ - International Business Centre (IBC)
MAA LEARNING CENTRE ပညာရေးဟောပြောဆွေးနွေးပွဲ
ကျင်းပမည့်ရက် - 23.5.2010 (Sun)
UK (BTEC) Higher National Diploma in Interactive Media နှင့် ပတ်သက်သည့် ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပမည်
UK (BTEC) Higher National Diploma in Interactive Media ဘာသာရပ်နှင့် ပတ်သက်သည့် ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲကို မေလ ၂၃ ရက်တွင် ရန်ကုန်မြို့ Park Royal Hotel ၌ နံနက် ၁ဝ နာရီမှ ၁၂ နာရီအထိ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း....
သဘာဝဘေး စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် GIS နှင့် Remote sensing နည်းပညာအသုံးချမှု (GIS and Remote Sensing Applications for Natural Disaster Management) သင်တန်းဖွင့်ပွဲ
ကျင်းပမည့်ရက် - 22.5.2010 (Sat)
9:00 am ကျင်းပမည့်နေရာ - မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအသင်း၊ လှိုင်တက္ကသိုလ်ဝင်း၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
တတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်ကို တည်ထောင်ခဲ့သူ အလောင်းမင်းတရားဦးအောင်ဇေယျ နှင့် ပတ်သက်သော ဥရောပသားများ၏ အမြင်နှင့် ၎င်း၏ လက်ထက်က မြန်မာနိုင်ငံ ခေတ်ကောင်းခဲ့သည်များကို ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်တက္ကသိုလ် အရှေ့တိုင်းပညာဌာနမှ ဒါရိုက်တာတစ်ဦးဖြစ်သူ Jacques Leider က အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ဟောပြောမည်ဖြစ်ကြောင်း....
ကျင်းပမည့်ရက် - 21.5.2010 (Fri)
6:30 pm ကျင်းပမည့်နေရာ - ပြင်သစ်သံရုံးယဉ်ကျေးမှုဌာန
C&G JOFEN ဘာသာရပ်မိတ်ဆက်ပွဲ စာရေးဆရာဖေမြင့် ဟောပြောမယ်
GALLANT သင်တန်းကျောင်းက City & Guilds (UK) Engineering Double Diploma ဘာသာရပ်မိတ်ဆက်ပွဲနှင့် City & Guilds Job Opportunity for Engineer Network (C&G JOFEN) မိတ်ဆက်ပွဲကို မေလ ၂ဝ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့ ပြည်လမ်း International Business Centre (IBC) ၌ နံနက် ၉ နာရီမှ ၁၂ နာရီအထိ ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း....
ကျင်းပမည့်ရက် - 20.5.2010 (Thu)
9:00 to 12:00 am ကျင်းပမည့်နေရာ - International Business Centre (IBC)
နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု ဘွဲ့ဒီဂရီရယူလိုသူများအတွက် ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲ မန္တလေးတွင် ပြုလုပ်မည် စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် အချိန်တိုတိုနှင့် အင်ဂျင်နီယာ၊ ကွန်ပျူတာနှင့် စီးပွားရေးဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုဘွဲ့ဒီဂရီရယူလိုသူများအတွက် ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲကို မေလ ၁၆ ရက်၊ နံနက် ၈ နာရီမှ ၉ နာရီအထိ မန္တလေးမြို့၊ Rayworld Complex ရှိ Sky Link Hall တွင် ကျင်းပပြုလုပ် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရ....
ကျင်းပမည့်ရက် - 16.5.2010 (Sun)
ကျင်းပမည့်နေရာ - Sky Link Hall , Mandalay
SIU ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲနှင့် အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ မန္တလေးတွင် ပြုလုပ်မည် နိုင်ငံတကာပညာရေးကို စိတ်ဝင်စားသူ မန္တလေးမြို့မှ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်ပြီးသူများနှင့် ဘွဲ့ရထားပြီးသူများအတွက် ထိုင်းနိုင်ငံရှိ Shinawatra University တွင် ပညာသင်ဆု လျှောက်ထားနိုင်ရန်....
သြစတြေးလျပညာရေးအကြောင်းဟောပြောမည် သြစတြေးလျပညာရေးကို စိတ်ဝင်စားသည့် မြန်မာနိုင်ငံမှ ကျောင်းသား/သူများအား သြစတြေးလျနိုင်ငံတွင် သင်ယူနိုင်မည့် Master of Information Technology (MIT) နှင့် Master of Business Administration (MBA) စသည့်အကြောင်းအရာများအပါအဝင်....
ကျင်းပမည့်ရက် - 15.5.2010 (Sat) , 16.5.2010 (Sun)
ကျင်းပမည့်နေရာ - Park Royal Hotel (Yangon) , Strand Hotel (Mandalay)
STI မှ ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်မည် STI Education မှ သင်ကြားပို့ချနေသော သင်တန်းနှင့် ဘာသာရပ်များအကြောင်း ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပွဲကို မေလ ၁၅ ရက်တွင် ပ့ါခ်ရွိုင်ရယ်ဟိုတယ်၌ ညနေ ၄ နာရီမှ ၆ နာရီထိ ပြုလုပ်သွားမည်ဟုသိရ....
ကျင်းပမည့်ရက် - 15.5.2010 (Sat)
CROWN Education နှင့် သြစတြေးလျ အစိုးရတက္ကသိုလ် တစ်ခုဖြစ်သော James Cook University တို့ပူပေါင်း၍ �MBA ဘွဲ့ များနှင့် သြစတြေး လျပညာ ရေး အကြောင်း သိကောင်း စရာ� များရှင်းလင်း ပြောကြားမည် CROWN Education နှင့် သြစတြေးလျ အစိုးရ တက္ကသိုလ် တစ်ခုဖြစ်သော၊ James Cook University တို့ မှ သြစတြေး လျပညာ ရေးကို စိတ်ဝင်စားသောမြန်မာနိုင်ငံမှ ကျောင်းသူကျောင်းသား များသိထား သင့်သော....
James Cook University နှင့် ပတ်သက်၍ ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပမည် မြန်မာနိုင်ငံမှ ကျောင်းသား ကျောင်းသူများအတွက် သြစတြေးလျနိုင်ငံ Queensland ပြည်နယ်သို့ James Cook University (Singapore) မှ တဆင့် ပညာသင်အခွင့်အလမ်းများ ဆွေးနွေးပွဲတစ်ရပ်အား....
ကျင်းပမည့်ရက် - 13.5.2010 (Thur)
ကျင်းပမည့်နေရာ - Bid 5, Room 4, Myanmar Info Tech
KMD Computer Centre တွင် James Cook University မှ ပညာရေးဆိုင်ရာဟောပြောပွဲ ကျင်းပမည် James Cook University (Singapore) ၏ ပညာရေးဆိုင်ရာဟောပြောပွဲကို မြေနီကုန်း KMD Computer Centre တွင်မေလ ၁၃ ရက်နေ့ မနက် ၁၁ နာရီတွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရ....
JCU (James Cook University) Education Seminar JCU (James Cook University) သည် ပညာရေးအတွေ့အကြုံအရ ကြယ်ငါးပွင့် အဆင့် သတ်မှတ်ချက် ရရှိထားပြီး သြစတြေးလျနိုင်ငံ၏ ဒုတိယ သက်တမ်း အရှည်ဆုံး နှင့် နိုင်ငံ့ထောက်ပံ့ ခံ တက္ကသိုလ် တခုဖြစ်....
ကျင်းပမည့်ရက် - 10.5.2010 (Mon)
ကျင်းပမည့်နေရာ - Parkroyal Hotel (Grand Ballroom)
Assumption University of Thailand ပညာရေးဟောပြောပွဲ Assumption University ၏ ပညာရေးဟောပြောပွဲကို မြန်မာနိုင်ငံ၏ တစ်ဦးတည်း ကိုယ်စားလှယ် ဖြစ်သော KMD Computer Centre မှ အောက်ပါ အစီအစဉ်အတိုင်း ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်....
ကျင်းပမည့်ရက် - 9.5.2010 (Sun)
စင်ကာပူပညာရေး၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနှင့် စာရင်းကိုင်ဘာသာရပ်အကြောင်း သိကောင်းစရာ ဟောပြောပွဲ ကျင်းပမည်
၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်တွင် ပြောင်းလဲတိုးတက်လာသော စင်ကာပူနိုင်ငံပညာရေး၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများနှင့် စာရင်းကိုင်ဘာသာရပ်အကြောင်းသိကောင်းစရာ ဟောပြောပွဲ ကို....
ကျင်းပမည့်နေရာ - Traders Hotel, Taung Ngu Room
Emergent Services Co.,Ltd. မှ ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပမည် Emergent Services Co.,Ltd မှ စာရင်းကိုင်ပညာနှင့် ပတ်သက်၍ ပညာရေးဟောပြောပွဲကို မေလ ၈ ရက်နေ့ ၊ နေ့လည် ၂ နာရီမှ ၃ နာရီအထိ Traders Hotel, Level 3, Konbauny Tagaung ခန်းမတွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရ....
ကျင်းပမည့်ရက် - 8.5.2010 (Sat)
ကျင်းပမည့်နေရာ - Traders Hotel, Level 3, Konbauny Tagaung ခန်းမ
IGCSE �O� & �A� Levels အသက် ၁၄ နှစ်မှ ၁၈ နှစ်ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများအတွက် ပညာရေးရှင်းလင်းဟောပြောပွဲ
ဟောပြောမည့် ပညာရှင် Mr.Michael Taylor (Assistant Director, MISY)
ကျင်းပမည့်နေရာ - MISY ၊ အမှတ်(၂၉)၊ (၇) မိုင်၊ ပြည်လမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့။
Murdoch University မှ ချီးမြှင့်မည့် Degree Programme များအကြောင်း ရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်မည် SMa Institute of Higher Learning, Singapore မှချီးမြှင့်သော နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု Certificate နှင့် Diploma သင်တန်းများကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် သင်ယူပြီး စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် သင်ယူပြီး....
ကျင်းပမည့်ရက် - 6.5.2010 (Thur)
စင်္ကာပူအမျိူးသားတက္ကသိုလ် (NUS) မှ ဘွဲ့ လွန်ဒီပလိုမာသင်တန်း အကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားမည်
စင်္ကာပူ အမျိုးသားတက္ကသိုလ် National University of Singapore (NUS) ၏ Institute of System Analysis တွင် ၂၀၁၀ သြဂုတ်လ Intake အတွက် Graduate Diploma in System Analysis ဘွဲ့လွန် ဒီပလိုမာကို တက်ရောက်လိုသူများ....
ကျင်းပမည့်ရက် - 4.5.2010 (Wed)
ကျင်းပမည့်နေရာ - CROWN Education Office
မြန်မာနိုင်ငံစက်မှုလက်မှုနှင့် ကုန်သည်ကြီးများအသင်းချုပ် (UMFCCI) မှ လစဉ်ကျင်းပသည့် ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာပညာရှင်များ ဟောပြောပွဲ
ဦးအေးကျော် (Managing Director cum Principal, Myanmar Human Resource) မှ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုကို စီမံခန့်ခွဲရန် မဟာဗျူဟာများ
(Strategies for Managing Organizational Change) ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဟောပြော....
ကျင်းပမည့်ရက် - 1.5.2010 (Sat)
ကျင်းပမည့်နေရာ - မြန်မာနိုင်ငံ စက်မှုလက်မှုနှင့် ကုန်သည်ကြီးများ အသင်းချုပ်အဆောက်အအုံ အမှတ် (၂၉)၊ မင်းရဲကျော်စွာလမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
U Aye Kyaw (MHR)
ကျင်းပမည့်နေရာ - Myanmar Fisheries Federation, Bayintnaung Road, West Gyogone , Insein Township,Yangon
Accounting On-Job Training နှင့် Computerized Accounting Package အတွက် ဟောပြောပွဲကျင်းပမည်
စာရင်းကိုင်ပညာရပ်နှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုလိုသူများ၊ B.Com, LCCI Level I and II or Level III, ACCA Part နှင့် Business Management အောင်မြင် ပြီး အတွေ့အကြုံမရှိသေးသူများ....
ကျင်းပမည့်ရက် - April Final Week
ကျင်းပမည့်နေရာ - MBC
Mistake 51 Area ၏ တစ်နှစ်ပြည့်အမှတ်တရတွေ့ဆုံပွဲနှင့် နည်းပညာဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပမည်
Mistake 51 Area ၏ တစ်နှစ်ပြည့်အမှတ်တရတွေ့ဆုံပွဲနှင့် နည်းပညာဆွေးနွေးပွဲကို ဧပြီလ ၂၁ ရက်နံနက် ၉ နာရီအချိန်တွင် အထက (၂) ဗိုလ်တထောင်
တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရ....
ကျင်းပမည့်ရက် - 21.4.2010 (Wed)
ကျင်းပမည့်နေရာ - အထက (၂) ဗိုလ်တထောင်
SIU တက္ကသိုလ်တွင် ပညာသင်ဆုလျှောက်ထားရယူနိုင်မည့် အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ နှင့် ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပမည်
မြန်မာနိုင်ငံမှ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်ပြီးသူများအနေဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံရှိ နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ shinawatra University (SIU) တွင် ၂ဝ၁ဝ ပြည့်နှစ် ဇွန်လ ကျောင်းဖွင့် ချိန်၌ International Program များကို ပညာသင်ဆုလျှောက်ထားရယူနိုင်ရန်....
ကျင်းပမည့်ရက် - 5.4.2010 (Mon)
စင်ကာပူပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ Tuition Grant အခွင့်အရေးအကြောင်း ဆွေးနွေးပေးမည်
နိုင်ငံတကာတွင် ပညာသင်ယူလိုသူများအတွက် RV! Centre Yangon မှ ပညာရေးပြပွဲများကို ၂ဝဝ၅ ခုနှစ်မှ စတင်၍ နှစ်စဉ်ကျင်းပပေးလျက်ရှိရာ ယခုနှစ်အတွက် ပညာရေးပြပွဲ ၂ဝ၁ဝ ကို ဧပြီလအတွင်း ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း....
ကျင်းပမည့်ရက် - 4.4.2010 (Sun)
စင်ကာပူပညာသင်ဆုရရှိနိုင်မည့် ပညာရေးပြပွဲ ၂ဝ၁ဝ ကျင်းပမည်
ကျင်းပမည့်ရက် - 3.4.2010 (Sat)
ကျင်းပမည့်နေရာ - Park Royal Hotel , Ballroom
Glasgow Caledonian University မှ Dr.Karen Thomson ကိုယ်တိုင် Seminar ပြောကြားမည်
Glasgow Caledonian University ၏ School of Life Sciences မှ Dr.Karen Thomson ကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြောကြား မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါ Seminar ကို Regent ပညာရေး ကုမ္ပဏီမှ ကြီးမှုးစီစဉ်ကာ....
ကျင်းပမည့်ရက် - 23.3.2010 (Tue)
ကျင်းပမည့်နေရာ - Traders Hotel တောင်ငူခန်းမ
MDIS မှ Manager များ၊ Professor များမှ Engineering ဆိုင်ရာ၊ ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ အစရှိသော ဘာသာရပ်များ အကြောင်းကို ဟောပြောပွဲများပြုလုပ်ရာတွင် မြန်မာကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ အထူးစိတ်ပါဝင်စားစွာ လာရောက်တက်ရောက်ကြသည်ကို တွေ့ရှိရ....
ကျင်းပမည့်ရက် - 28.3.2010 (Sun)
ကျင်းပမည့်နေရာ - Park Royal Hotel , Meeting Room � 3
MAA Learning Center မှ ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပမည် Nanyang Institute of Management (Singapore) မှ ပေးအပ်ချီးမြှင့်မည့် Diploma in Tourism and Hospitality Management နှင့် ပတ်သက်၍ ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲကို မတ်လ ၂၉ ရက်နေ့တွင် မန္တလေးမြို့ MAA Learning Center သင်တန်း ခန်းမ၌ ....
ကျင်းပမည့်ရက် - 29.3.2010 (Mon)
ကျင်းပမည့်နေရာ - မန္တလေးမြို့ MAA Learning Center သင်တန်း ခန်းမ
Asia Speed Education နှင့် ERC Institute တို့ပူးပေါင်း၍ ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပမည် Asia Speed Education နှင့် ERC Institute တို့ပူးပေါင်း၍ � Right Education for the Right Carrer � ခေါင်းစဉ်ဖြင့် MBA in International Business ပညာရေးဟောပြောပွဲကို မန္တလေးမြို့ဆီဒိုးနားဟိုတယ်၌ ....
ကျင်းပမည့်ရက် - 24.3.2010 (Wed)
ကျင်းပမည့် အချိန် - 2:00 to 4:00 pm
ကျင်းပမည့်နေရာ - Sedona Hotel (Mandalay)
USA နှင့် UK ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်များဆိုင်ရာ ပညာရေးရှင်းလင်းပွဲကျင်းပမည် USA နှင့် UK နိုင်ငံရှိ ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်များသို့ တက်ရောက်နိုင်ရန်အတွက် Regent ပညာရေး ကုမ္ပဏီမှ ကြီးမှူးကျင်းပသော ပညာရေးမိတ်ဆက်ပွဲတွင်
INTO University မှ လာရောက်တင်ပြမည်ဖြစ်ကြောင်း....
ကျင်းပမည့်ရက် - 20.3.2010 (Sat)
ကျင်းပမည့် အချိန် - 5:00 to 6:00 pm
ကျင်းပမည့်နေရာ - Traders Hotel (Level 3) ကုန်းဘောင်တကောင်းခန်းမဆောင်
Shinawatra University (SIU) တွင် ၁ဝဝ ရာခိုင်နှုန်း ပညာသင်ဆုဖြင့် တက်ရောက်နိုင်မည့် ပညာရေး ဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပမည် ထိုင်းနိုင်ငံရှိ နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ Shinawatra University (SIU) တွင် လာမည့် ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်၊ ဇွန်လကျောင်းဖွင့်ချိန်၌ ၁ဝဝ ရာခိုင်နှုန်း ပညာသင်ဆုဖြင့် International Programs များကို ပညာသင်ဆု လျှောက်ထားခြင်းဆိုင်ရာ ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲကို....
ကျင်းပမည့်ရက် - 21.3.2010 (Sun)
ကျင်းပမည့် အချိန် - 10:00 to 12:00 ကျင်းပမည့်နေရာ - OESC Seminar Room
Education For All � ယနေ့ UK ပညာရေးနှင့် ဗီဇာအပြောင်းအလဲများ� ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဟောပြောပွဲကျင်းပမည် နဝရတ်ပညာရေး၏ Education for All အစီအစဉ်အရ �ယနေ့ UK ပညာရေးနှင့် ဗီဇာအပြောင်းအလဲများ� ခေါင်းစဉ်ဖြင့် နိုင်ငံရပ်ခြား ပညာသင် သိကောင်းစရာဟောပြောပွဲကို မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့ (စနေနေ့) နေ့လယ် ၁းဝဝ နာရီမှ ၃းဝဝ နာရီအထိ....
ကျင်းပမည့်ရက် - 27.3.2010 (Sat)
ကျင်းပမည့် အချိန် - 1:00 to 3:00 ကျင်းပမည့်နေရာ - Traders Hotel (Level 3) ကုန်းဘောင်တကောင်းခန်းမဆောင်
ဗြိတိန်နှင့် အမေရိကန် ပညာသင်စနစ်များအကြောင်းရှင်းလင်းမည် ဗြိတိန်နိုင်ငံနှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ တက္ကသိုလ်များတွင် သွားရောက်ပညာသင်ယူနိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်သော အချက်အလက်များအကြောင်း ရှင်းလင်း ဟောပြောပွဲကို မတ်လ ၂ဝ ရက်၊ ညနေ ၅ နာရီမှ စတင်၍ ကုန်သည်ကြီးများဟိုတယ်၌ ကျင်းပမည်....
ကျင်းပမည့် အချိန် - 5:00 pm ကျင်းပမည့်နေရာ - Traders Hotel
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းဖြေဆိုထားသူများအတွက် ပညာရေးဟောပြောပွဲ စင်ကာပူအစိုးရကျောင်း Singapore Building
Construction Authority Academy (BCA) ကဖွင့်လှစ် မည့်အင်ဂျင်နီယာဒီပလိုမာ သင်တန်းများနှင့် ပတ်သက်ပြီး
ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲကို နိုဝင်ဘာလ ၂၈ရက်နေ့တွင်
ရန်ကုန်မြို့တော်ရှိ ကုန်သည်ကြီးများဟိုတယ်၌ ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်တွင်း ပညာရေးဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း Care Forever မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြား....
ကျင်းပမည့်ရက် - 20,21,27,28.3.2010,3.4.2010
ကျင်းပမည့် အချိန် - 1:00 to 3:00 pm
ကျင်းပမည့်နေရာ - Myanmar Info-Tech၊ အခန်း ၂ဝ၅၊ လှိုင်မြို့နယ်၊
STUDY AND JOB OPPORTUNITIES IN SINGAPORE
Seminar & Entry Test Schedule
နေ့ရက် : 17.3.2010 (Wed)
အချိန် : 2:00 to 4:00 pm
နေရာ : Traders Hotel Entry Test
နေ့ရက် : 18.3.2010 (Thur)
အချိန် : 8:00 to 12:00 am
နေရာ : Traders Hotel Read More
စင်ကာပူ အင်ဂျင်နီယာ ဒီပလိုမာ ပညာရေးဆွေးနွေး
စင်ကာပူအစိုးရကျောင်း Singapore Building
ကျင်းပမည့်ရက် - 18.11.2009 (Wed)
Trader Hotel Read More သြစတြေးလျပညာသင်သိကောင်းစရာဟောပြောပွဲကျင်းပမည်
MIEC.PMC Group နှင့် CETA (Complete Education and Touring Australia) တို့ပူးပေါင်းစီစဉ်သော သြစတြေးလျပညာသင်သိကောင်းစရာအကြောင်း ပညာရေးဟောပြောပွဲကို ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း....
ကျင်းပမည့်ရက် - 29.11.2009 (Sun)
ကျင်းပမည့် အချိန် - 3:00 to 4:00
ကျင်းပမည့်နေရာ - Trader Hotel. Read More Web Development နည်းပညာနှင့်ပတ်သက်၍ ဟောပြောပွဲကျင်းပမည်
သတင်းအချက်အလက် နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ICT နည်းပညာရပ်များကို လေ့လာသင်ယူနေသော မြန်မာလူငယ်များ Web Application Development နည်းပညာများကို ပိုမိုနားလည်သဘောပေါက် ကျွမ်းကျင်မှုရှိစေရန် ရည်ရွယ်၍....
ကျင်းပမည့်ရက် - 21.11.2009 (Sat)
ကျင်းပမည့် အချိန် - 2:00 to 5:00
ရန်ကုန်မြို့။ Read More Online Learning Info-Talk ကို Smart Resources တွင်ပြုလုပ်မည်
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဦးဆုံး UK, USA နှင့် Singapore တက္ကသိုလ်များ၏ Online Graduate Learning Program အားပြည်တွင်းမှာပင် Internet ဖြင့် လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း အသေးစိတ်ရှင်းလင်း တင်ပြမည့် Info-Talk ကို အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း ကျင်းပပြုလုပ်....
ကျင်းပမည့်ရက် - 19.11.2009 (Thu)
ကျင်းပမည့် အချိန် - 1:00 to 3:00
ကျင်းပမည့်နေရာ - SR Education Centre (Yangon) Read More အမေရိကန်မှ Degree ရယူနိုင်သော ထိုင်းနိုင်ငံမှ ဘာသာရပ်များ Seminar ပြုလုပ်မည်
အမေရိကန် Degree ကိုအိမ်နီးချင်းအာရှနိုင်ငံ ထိုင်းနိုင်ငံ Webster University တွင်တက်ရောက် နိုင် သော Program များအကြောင်း Seminar ကို နိုဝင်ဘာလ ၂ဝရက်နေ့တွင် ဗိုလ်ကလေးဈေးလမ်းရှိ Success Language Academy တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဟု Myanmar Search International Services Co.,Ltd ထံမှ သိရ....
ကျင်းပမည့်ရက် - 12.11.2009 (Thu)
ကျင်းပမည့် အချိန် - 2:00
ကျင်းပမည့်နေရာ - ဆရာအာသာရဲ့ Success Language Academy Read More စဉ်းစားခြင်းနှင့် နေထိုင်ခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံ ဟိုတယ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှ ကျင်းပသည့် ပညာရှင်များ ဟောပြောပွဲများကို ၂ဝဝ၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၁)ရက်နေ့မှစ၍ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ ဟောပြောပွဲများကို တစ်လတစ်ကြိမ် ပထမထပ်၊ ကြာသပတေးနေ့ တွင်ကျင်းပ....
ကျင်းပမည့်ရက် - 3.12.2009 (Thu)
ကျင်းပမည့် အချိန် - 4:00
ကျင်းပမည့်နေရာ - ASIA PLAZA HOTEL (အထက်-၃၈ လမ်း) Read More သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်ချိန် အရေးပေါ် ကြိုးမဲ့အင်တာနက် ချိတ်ဆက်ခြင်း အကြောင်းဆွေးနွေးမည်
ဆက်သွယ်ရေး ပြတ်တောက်သွားသည်အထိ ကြီးမားသော သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်ချိန်တွင် အရေးပေါ် Wireless Internet Emergency Networks တည်ဆောက်ခြင်း အကြောင်း...
ကျင်းပမည့်ရက် - 5.12.2009 (Sat)
ကျင်းပမည့် အချိန် - 9:00 to 12:00
ကျင်းပမည့်နေရာ - သမ္မတဟိုတယ် (ပထမထပ်)၊ အခန်း (ME-103) Read More E-Commerce and Intellectual Property
သမြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ် (MCF) နှင့် မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာလုပ်ငန်းရှင်အသင်း (MCIA) တို့မှ ကြီးမှူး၍ ကျင်းပသော “E-Commerc and
Intellectual Property” ဆိုင်ရာဟောပြောပွဲကို ကျင်းပပြုလုပ်...
ကျင်းပမည့် အချိန် - 1:00 to 4:00
ကျင်းပမည့်နေရာ - Myanmar Info-Tech၊ Conference Hall Read More Curtin University ၏ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲ
Myanmar Search International (MSI) မှမလေးရှားနိုင်ငံရှိ Curtin University နှင့် ပတ်သက်၍ ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲကို ဒီဇင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့ နံနက် ၁၁းဝဝ နာရီ မှ နေ့လည် ၁းဝဝ နာရီ အထိ Park Royal Hotel Meeting Room3တွင် ကျင်းပပြုလုပ်....
ကျင်းပမည့်ရက် - 6.12.2009 (Sun)
ကျင်းပမည့် အချိန် - 11:00 to 1:00
ရန်ကုန်မြို့။ Read More " Good Practices in Software Development “
ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း၏ ဖိတ်ကြားမှုဖြင့် ကမ္ဘာကျော် Software ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုဖြစ်သော Oracle Corporation ၏ ကောင်းမွန်သော Software Development အတွေ့အကြုံကောင်းများ၊ အလေ့အကျင့်ကောင်းများအား မြန်မာနိုင်ငံရှိ Software Engineer များလေ့လာသိရှိနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်၍....
ကျင်းပမည့်ရက် - 13.11.2009 ( Fri )
ရန်ကုန်မြို့။ Read More "MCPA Exam အကြောင်းသိကောင်းစရာ” ဟောပြောပွဲကျင်းပမည်
သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင် အသင်းမှကြီးမှူး၍ ယနေ့ခေတ် IT Industry ၏ လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ အရည်အချင်းပြည့်ဝသော ITပညာရှင်များပေါ်ထွက်လာရန် ရည်ရွယ်၍.....
ကျင်းပမည့်ရက် - 14.11.2009 ( Sat )
ရန်ကုန်မြို့။ Read More တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်ပြီးသူများအတွက် ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်မည်
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်ပြီးသူများအတွက် မှန်ကန်သည့် လမ်းကြောင်းများရွေးချယ်နိုင်ရန် ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲကို နိုဝင်ဘာလ ၁၄ ရက်နံနက် ၁ဝ နာရီမှ ၁၂ နာရီအထိ လပြည့်ဝန်းပလာဇာ ၈လွှာရှိ Raffles International Admissions Office တွင်ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း
ကျင်းပမည့် အချိန် - 10:00 to 12:00
ကျင်းပမည့်နေရာ - လပြည့်ဝန်းပလာဇာ ၈ လွှာ၊ Raffles International Admissions Office Read More
အင်္ဂလိပ်စာအရည်အသွေးတိုးတက်လိုသူတိုင်းအတွက် Free Workshop ကျင်းပမည်
Workshop တွင်အထူး သဖြင့်နေ့စဉ်ထိတွေ့ ပြောဆိုနေရသော English Communication အတွက် ပိုမိုထိရောက်စွာအသုံးချနိုင်ရန်၊ Effective Englsih Communication ၏ Tips & Tricks၊ Do/ Don’t (ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်)နှင့် Presentation Skill များကို နိုင်ငံတကာမှ ဘွဲ့ရရှိထားသောဆရာ၊ ဆရာမများက အခမဲ့တက်ရောက်သင်ကြားဆွေးနွေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း....
ကျင်းပမည့် အချိန် - 3:00 to 5:00
ကျင်းပမည့်နေရာ - Trader Hotel. Read More»
MBA ဘွဲ့ဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်မည်
ဆွေးနွေးပွဲတွင် အနာဂတ် MBA အလားအလာနှင့် ယူကေ MBA နှင့် သြစတြေးလျ MBA ဘွဲ့များ၏ကွဲပြားခြားနားမှုများ၊ MBA ဘွဲ့သင်ကြားပေးသည့်ကျောင်းများ မှန်ကန်စွာရွေး ချယ်နိုင်ရန်အတွက် MBA တက်ရောက်မည့် ကျောင်းများတွင်ရှိသင့်သည့် အရည်အသွေးများနှင့် ထည့်သွင်း စဉ်းစားရမည့် အချက်များMBA တက်ရောက်လိုသူများတွင် ရှိရမည့် အရည်အချင်းများနှင့် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု ထားရမည့် အချက်အလက်များ၊ IT ဘွဲ့ရများအနေဖြင့် Master of IT ကို MBA နှင့်ပူးတွဲယူနိုင်မည့် အခွင့်အ ရေး စသည်တို့ကို ဆွေးနွေး သွားမည်...
ကျင်းပမည့်နေရာ - Park Royal Hotel, ရန်ကုန်မြို့။ Read More
Singapore Institute of Management (SIM)၏ ပညာရေး မိတ်ဆက်ပွဲကျင်းပမည်
အဆိုပါပညာရေးမိတ်ဆက်ပွဲတွင် စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ SIM မှ တာဝန်ရှိသူများမှ လာရောက်၍ SIM တွင် တက်ရောက်နိုင်မည့် ဘာသာရပ်များ၊ ကျောင်းဝင်ခွင့် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် အခြားအချက်အလက်များ ဆွေးနွေးဟောပြောသွားမည်....
ကျင်းပမည့် အချိန် - 3:30 to 6:00
ကျင်းပမည့်နေရာ - Trader Hotel (Level-3) ပုဂံခန်းမ
ရန်ကုန်မြို့။ Read More
James Cook University ၏ ပညာရေး Seminar ကျင်းပမည်
အဆိုပါပညာရေး Seminar တွင် James Cook University မှတာဝန်ရှိသူများမှ JCU တွင် တက် ရောက်နိုင်မည့် ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာများ၊ မြန်မာနိုင်ငံမှ IT ဘွဲ့ရ ကျောင်းသားများအနေဖြင့် တက်ရောက်နိုင်မည့် Joint Master Programme ဆိုင်ရာ အကြောင်းများကို ဆွေးနွေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း....
ကျင်းပမည့်နေရာ - Park Royal Hotel ရန်ကုန်မြို့။ Read More